စီးပွားရေး – Page2– Eleven Media Group
Posted on July 21, 2018 July 22, 2018 by ဆန်းထူးအောင်
ရန်ကုန်မြို့ လှိုင်သာယာမြို့နယ် အတွင်းရှိ စက်မှုဇုန်ကို ဝေဟင်မှ တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-ဝေလင်းအောင်)
ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်စွမ်း မရှိသဖြင့် လှိုင်သာယာမြို့နယ် အတွင်းရှိ အထည်ချုပ်စက်ရုံ အပါအ၀င် စက်ရုံ ၁၄ ရုံ သုံးလအတွင်း ပိတ်သိမ်းခဲ့ရသည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ကျွန်မတို့ဆီကို စက်မှုဇုန်ဥက္ကဋ္ဌက ပို့ ထားတာပါ။ စက်ရုံပိတ်သိမ်းတာ ဘာကြောင့် ပိတ်သိမ်းတာလဲဆိုတာ ရှိပါတယ်။ တချို့ဟာတွေက ခေတ်နဲ့မလျော်ညီတော့လို့ ပိတ်သိမ်းရတာမျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ခေတ်နဲ့မလျော်ညီတော့ဘူး။ ပြိုင်ဘက်တွေ ရောက်လာတယ်။ ရပ်တည်နိုင်စွမ်းမရှိလို့ ပိတ်သိမ်းတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့် ပိတ်သိမ်းသလဲ ဆိုတာကို သူတို့က အကြောင်းပြချက် ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုမျိုး စက်ရုံတွေ ပိတ်သိမ်းတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ရပ်တည်နိုင်စွမ်း မရှိဘူးဆိုတာ အကြောင်းအမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ အလုပ်သမားတွေက လုပ်ခလစာနည်းလို့ အခြားလုပ်ငန်းခွင်ကို ပြောင်းသွားတာလား။ သူ့အနေနဲ့ ခေတ်မမီတော့တဲ့ အတွက် ပြိုင်ဘက်တွေကို မယှဉ်ပြိုင်နိုင်တော့လို့ လုပ်ငန်းတွေ ပိတ်သိမ်းတာလား။ သူတို့ရဲ့ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားကျလို့ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းတာလားဆိုတဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် စက်ရုံပိတ်သိမ်းတဲ့အတွက် ကျွန်မ စိတ်ပူမိတာက အလုပ်သမား ၃၇၀၀ ကျော်လောက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းက လျော့နည်းသွားတယ် ဆိုတာက စိုးရိမ်စရာ ဖြစ်တယ်” ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ဘဏ္ဍာရေး၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်စန္ဒာမင်းက ပြောကြားသည်။
ထို့ပြင် အစိုးရအနေဖြင့် သတိပြုမိပါက ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရမည်များကို ဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဘဏ္ဍာရေး၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေး ကော်မတီက စောင့်ကြည့်နေကြောင်း၊ နောက်ထပ် တင်ပြလာမည့် ကိစ္စများကိုလည်း စောင့်ကြည့်နေကြောင်း၊ ယခုကိစ္စသည် လွှတ်တော်အတွင်း ဆွေးနွေးရမည့် ကိစ္စတစ်ခုအဖြစ် မြင်ကြောင်း ဒေါ်စန္ဒာမင်းက ပြောကြားသည်။
လက်ရှိ ပိတ်သိမ်းသွားသည့် စက်ရုံများသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် မေ ၇ ရက်မှ ဇူလိုင် ၁၀ ရက်အထိ စက်ရုံ ၁၄ ရုံရှိသည်ဟု သိရပြီး ၎င်းစက်ရုံများသည် မိကျောင်းပီနံအိတ်စက်ရုံ၊ ပုလဲအထည်ချုပ်စက်ရုံ၊ ၀ါးဟားဟား ရေခဲမုန့် စက်ရုံ၊ မြတ်ပန်းမွှေး သနပ်ခါးစက်ရုံ၊ ရေခဲတောင် အအေးခန်းစက်ရုံ၊ Cham Zon အထည်ချုပ် စက်ရုံ၊ Success Time ဖိနပ်စက်ရုံ၊ Beauty Place လူသုံးကုန်စက်ရုံ၊ Kuwahara အထည်စစ်စက်ရုံ၊ TMP ငါးဖမ်းပိုက် စက်ရုံ၊ မြို့မဆင်ဖြူတော် ပဲသန့်စင်စက်ရုံ၊ United Knitting Myanmar Co.,Ltd. ခြေအိတ်စက်ရုံ၊ Popular အထည်ချုပ်စက်ရုံနှင့် North Shore Group အထည်ချုပ်စက်ရုံ တို့ဖြစ်ကြောင်း ထွက်ပေါ်နေသော သတင်းများအရ သိရသည်။
အဆိုပါ မိကျောင်းပီနံအိတ် စက်ရုံတွင် အလုပ်သမား ၉၂ ဦး၊ ပုလဲအထည်ချုပ်စက်ရုံတွင် အလုပ်သမား ၉၆၃ ဦး၊ ၀ါးဟားဟား ရေခဲမုန့် စက်ရုံတွင် အလုပ်သမား ၁၇ ဦး၊ မြတ်ပန်းမွှေး သနပ်ခါးစက်ရုံတွင် အလုပ်သမား ၄၉ ဦး၊ ရေခဲတောင် အအေးခန်းစက်ရုံတွင် အလုပ်သမားကိုးဦး၊ Cham Zon အထည်ချုပ်စက်ရုံတွင် အလုပ်သမား ၃၈၀၊ Success Time ဖိနပ်စက်ရုံတွင် အလုပ်သမား ၃၆၀၊ Beauty Place လူသုံးကုန်စက်ရုံတွင် အလုပ်သမား ၁၈၅ ဦး၊ Kuwahara အထည်စစ်စက်ရုံတွင် အလုပ်သမား ၃၅ ဦး၊ TMP ငါးဖမ်းပိုက်စက်ရုံတွင် အလုပ်သမား ၅၆ ဦး၊ United Knitting Myanmar Co.,Ltd. ခြေအိတ် စက်ရုံတွင် အလုပ်သမား ၄၅၁ ဦး၊ Popular အထည်ချုပ်စက်ရုံတွင် အလုပ်သမား ၄၅၁ ဦးနှင့် North Shore Group အထည်ချုပ်စက်ရုံတွင် အလုပ်သမား ၆၈၆ ဦး စုစုပေါင်း ၃၇၃၉ ဦး အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရသည်ဟု သိရသည်။
“စက်ရုံတွေ ပိတ်တယ်လို့ကြားတယ်။ ပိတ်ဖို့ရှိတယ်လို့ ကြားတယ်။ အဓိက,ကတော့ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း အလုပ်ပေါ့။ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်တဲ့ အလုပ်ရုံတွေက နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာလည်း ရှိတယ်။ ပြည်တွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာလည်း ရှိတယ်။ ထုတ်လုပ်မှု အပိုင်းမှာပဲ နိုင်ငံနဲ့ ပြည်တွင်း ပူးပေါင်းလို့ဖြစ်စေ၊ ပြင်ပပို့ ထုတ်လုပ်တာရှိတယ်။ ပိတ်သွားတဲ့ ရုံတွေထဲမှာ လေ့လာရသလောက် နိုင်ငံခြားပိုင်တဲ့ လူ ၈၀၀၊ ၉၀၀ လောက်ရှိတဲ့ရုံလည်း ပိတ်တယ်လို့ ကြားတယ်။ ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းလေးတွေ ပိတ်တယ်လို့လည်း ကြားတယ်။ နောက်ဆုံး ရေခဲမုန့်ထုတ်တဲ့ ပြည်တွင်း အလုပ်ရုံ ပိတ်တာလည်း ကြားတယ်။ ထိခိုက်မှုက ဒီမှာပဲ ထိခိုက်တယ်လို့ ပြောလို့မရဘူး” ဟု ကုန်သည်စက်မှု အသင်းချုပ် (UMFCCI) မှ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ခိုင်ခိုင်နွယ်က ဆိုသည်။
ထို့ပြင် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံတစ်ခုအား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် မလွယ်ကူကြောင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရာတွင် ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာများ၊ အလုပ်သမားရရှိမှုနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ ပိုင်းများကို လေ့လာရကြောင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရာတွင် တာဝန်ယူရသည့် အလုပ်သမားများ၊ ဆက်ဆံရသည့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဈေးကွက် ရရှိလာသည့် အချိန်တွင် လုပ်ငန်းကို ရပ်ဆိုင်းရန် မလွယ်ကူကြောင်း၊ စက်ရုံများ ပိတ်လိုက်ခြင်းသည် ဆက်လက် လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း မရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆက်လက် ပြောကြားသည်။
“နိုင်ငံခြားနဲ့ မြန်မာ ဘာတွေကွာလဲဆိုတော့ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ သူတွေက သူများနိုင်ငံကို လာလုပ်တဲ့အတွက် တွက်ချက်တဲ့အခါမှာ သူတို့ထုတ်တဲ့ ထုတ်ကုန်ရဲ့ဈေးကွက် မခိုင်မာရင် မလာဘူး။ အဲဒါကို သူတို့ အရမ်းတွက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေက တိုင်းပြည်ကလည်း အကူးအပြောင်း တစ်ခုဆိုတော့ အချိန်က တကယ်ယူရမှာ။ ဒီလိုယူတဲ့ကာလမှာ ပြည်တွင်း လုပ်ငန်းရှင်တွေ အနေနဲ့က ဈေးကွက်တစ်ခု ခိုင်ခိုင်မာမာ ရှိတဲ့သူလည်း ရှိတယ်။ မရှိတဲ့သူ ပိုများတယ်။ အထူးသဖြင့် ထုတ်လုပ်မှု အပိုင်းမှာ။ အဲဒီမှာတင်ကို ဟိုဘက်က ခိုင်မာတဲ့ ဈေးကွက်ရှိတယ်။ ဒီဘက်က အခုမှ စ,စမ်းနေရတာရှိတယ်။ သူများကို မှီပြီးတော့ရတဲ့ ဈေးကွက်ရှိတယ်။ လွတ်လပ်မှုမရှိဘူး။ အဲဒါက ကိုယ့်မှာ အားနည်းချက်ဖြစ်တယ်” ဟု ဒေါ်ခိုင်ခိုင်နွယ်က ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ထို့ကြောင့် Public Private Partnership (PPP) ဖြင့် ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အစိုးရဘက်မှလည်း ဥပဒေ အထောက်အပံ့များပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် ၎င်းတို့လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန် ချေးယူထားသည့် Interest Rate သည် နည်းပါးကြောင်း၊ ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် အတွက် ဘဏ်များမှ ငွေချေးရာတွင် Interest Rate များနေကြောင်း ၎င်းကဆက်လက် ပြောကြားသည်။
“အရင်ထက်စာရင် ချေးငွေတွေ တော်တော်ရနေတယ်လို့ ကြားတယ်။ ဒါပေမဲ့ Interest Rate ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ မနိုင်ဝန် ဖြစ်နေတယ်။ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ထုတ်လုပ်မှုမှာ လုပ်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ ဘဏ်အတိုးနှုန်းဖြစ်တဲ့ တစ်နှစ်မှာ ၁၃ ရာခိုင်နှုန်း ဆိုတဲ့ဟာက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကိုယ့်လုပ်ငန်း ကိုယ်ပြောရင်တောင် အမြတ်က တစ်နှစ်မှာ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း ရဖို့မလွယ်ပါဘူး။ နှစ်ရာခိုင်နှုန်းတောင် ရဖို့မလွယ်တာတွေရှိတယ်။ အနုတ်ပြသွားတဲ့ ဟာတွေတောင်ရှိတယ်။ အနုတ်ပြတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ အများကြီး ကြားနေတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ အလုပ်သမားတွေကို အလုပ်ပေးနိုင်သေးတယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ လုပ်နေကြတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေ အများကြီး ရှိတယ်။ အဲဒီတော့ မြတ်ဖို့မလွယ်တဲ့ဟာကို Interest Rate ကို ၁၂ ရာခိုင်နှုန်း ၁၃ ရာခိုင်နှုန်း ပေးရတဲ့ အခါကျတော့ လုပ်ငန်းရှင်တွေမှာ ဒီဟာပေးဖို့ အတွက်ကို ၀န်ပိုပိတယ်။ အမှန်ပြောရရင် ဘယ်သူ့ကိုမှ အပြစ်တင်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ အမှန်ကို ပြောပြတဲ့ အခြေအနေပဲရှိတယ်။ အစိုးရရဲ့ ထောက်ပံ့မှု အပိုင်းမှာတော့ လုပ်နေကြတာလည်း မြင်တယ်။ လိုအပ်မှုက နှစ်ရှည်လများ လိုအပ်တဲ့ လိုအပ်မှု ဖြစ်နေတာ။ အခုက စက်ရုံပိတ်တာက တစ်ခုတည်းကြောင့်တော့ မဟုတ်ဘူး။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လာတာက ခက်တယ်။ ပြန်ထွက်ဖို့က ပိုခက်တယ်။ အမြတ်အစွန်း နည်းနည်းနဲ့။ တစ်ခါတလေ အမြတ်အစွန်းတောင်မရှိဘဲ အိတ်စိုက်လုပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေ ရှိတယ်လို့ ယုံကြည်စွာ ပြောရဲတယ်။ မြတ်ပြီးတော့ အကျိုးအမြတ် မရှိဘဲနဲ့ စက်ရုံပိတ်ပြီးတော့ ပြန်သွားတဲ့ လုပ်ငန်းရှင် မရှိဘူး ဆိုတာကို ယုံကြည်စွာ ပြောရဲတယ်။ ကောင်းနေ မြတ်နေရင် စီးပွားလုပ်ဖို့ လာတဲ့သူက ဘာကြောင့် ပြန်မှာလဲ။ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်သာ ပြန်တာဖြစ်တယ်” ဟု ဒေါ်ခိုင်ခိုင်နွယ်က ပြောကြားသည်။
ယခုကဲ့သို့ စက်ရုံများ ပိတ်သိမ်းမည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အလုပ်သမား သမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်က ပိတ်သိမ်းမည်ဟု သတင်းထွက်ပေါ်နေသည့် စက်ရုံ ၁၄ ရုံအနက် အလုပ်သမား ၃၂၉၁ ဦးကို အလုပ်ခန့်ထားပေးသည့် စက်ရုံခြောက်ရုံကို စုံစမ်းလေ့လာခဲ့ကြောင်း အလုပ်သမားသမဂ္ဂ၏ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါ ဖော်ပြချက်တွင် United Knitting Myanmar Co., ခြေအိတ်စက်ရုံသည် မပိတ်သိမ်းဘဲ လက်ရှိ လည်ပတ်နေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း၊ ပိတ်ဖို့အစီအစဉ် ရှိသည်ကိုလည်း မကြားရကြောင်း၊ Popular အထည်ချုပ် စက်ရုံသည် လက်ရှိလည်ပတ်လျက်ရှိကြောင်း၊ Success Time ဖိနပ်စက်ရုံသည် လုပ်ငန်းအပြီး ပိတ်သိမ်းပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ရပ်ဆိုင်းခြင်း မဟုတ်ဘဲ စက်ရုံမြေနေရာ ငှားရမ်းမှု စာချုပ်ပြည့်ပြီး ရွှေလင်ဗန်း စက်မှုဇုန် (၅)သို့ ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြစ်ကာ အလုပ်သမားများကိုလည်း စက်ရုံနေရာသစ်သို့ လိုက်ပါရန် ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း၊ North Shore အထည်ချုပ်စက်ရုံသည် လုပ်ငန်းအပြီးပိတ်သိမ်းပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ရပ်ဆိုင်းခြင်း မဟုတ်ဘဲ မင်္ဂလာဒုံသို့ စက်ရုံပြောင်းရွှေ့ ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ပုလဲ အထည်ချုပ် စက်ရုံသည် စက်ရုံမြေနေရာ ငှားရမ်းမှု အခက်အခဲ ရှိသည့်အတွက် ပိုင်ရှင်တူ စက်ရုံဖြစ်သည့် လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန် (၄) ထဲမှ မြန်မာ အပရယ် အထည်ချုပ်စက်ရုံသို့ ပြောင်းရွှေ့ပြီး အလုပ်သမားများပေါင်းကာ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်း၊ Cham Zon အထည်ချုပ် စက်ရုံသည် အော်ဒါအရ နည်းသည့်အတွက် လွန်ခဲ့သည့် ခြောက်လခန့်မှစ၍ ပိတ်သွားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပါရှိသည်။
Posted in NewsTagged စက်မှုဇုန်, စီးပွားရေးLeaveaComment on ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်စွမ်း မရှိသဖြင့် လှိုင်သာယာမြို့နယ် အတွင်းရှိ အထည်ချုပ်စက်ရုံ အပါအ၀င် စက်ရုံ ၁၄ ရုံ သုံးလအတွင်း ပိတ်သိမ်းခဲ့ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်
စီးပွားရေး အနေအထားနှင့် အစိုးရ၏ သြဇာသက်ရောက်မှု
Posted on July 20, 2018 July 22, 2018 by Eleven Media Group
ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးသည်ပင်လျှင် တည်ငြိမ်သည်လည်း ရှိနိုင်၊ မတည်မငြိမ်ဖြစ်သည်လည်း ရှိနိုင်၏။ စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းတစ်ရပ်အတွင်း ပြည်သူလူထုက အစိုးရအား ပြစ်တင်ဝေဖန်ကြမည်မှာလည်း ဓမ္မတာပင်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေဝေ ဖန်ပြစ်တင်မှုများ၏ နောက်မှနေ၍ ဖြေရှင်းပေးရန် တောင်းဆိုမှုများ လိုက်ပါ၍လာမည်သာ ဖြစ်သည်။ အချို့က အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်တွင် အစိုးရက ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းသည် ဆိုရှယ်လစ်စနစ်နှင့် အတူတူပင်ဖြစ်သွားလိမ့်မည်ဟု တွေးနိုင်သည်။ အမှန်တကယ်၌ အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် စီးပွားရေးကို ထိန်းချုပ်ရန် နည်းလမ်းများစွာဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုပုံစံတစ်ရပ်တွင် ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀န်ဆောင်မှုများ ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာပြီး ငွေကြေးတန်ဖိုး ကျဆင်းသွားသည်ကို တွေးကြည့်နိုင်သည်။ ယင်းအနေအထား၌ အစိုးရက အခွန်ငွေကို ဆွဲတင်ကာ အသုံးအစွဲ လျှော့ချလိုက်ခြင်းမျိုး ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထိုအခါ နိုင်ငံအတွင်း၌ ငွေကြေးထည့်သွင်းမှု လျှော့ချလိုက်ခြင်းကြောင့် ငွေကြေးတန်ဖိုး ပြန်လည်မြင့်တက်လာကာ ဈေးနှုန်းများ ကျဆင်းသွားစေနိုင်သည်။
ဈေးနှုန်းများ ကျဆင်းသွားပြီးဖြစ်သော်လည်း စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းနှင့်ရင်ဆိုင်ရကာ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်း အလွန်မြင့်မားသည့် အနေအထားကိုလည်း တွေးကြည့်နိုင် သည်။ ထိုအခါ ယင်းပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် အစိုးရသည် စီးပွားရေးအတွင်းသို့ ငွေကြေးပို၍ ထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး အသုံးအစွဲကို မြှင့်တင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အချို့သော အနေအထားများ၌ အခွန်အတုတ်များကို လျှော့ချရမည်ဖြစ်သည်။ ပြည်သူလူထု၏ လက်ထဲသို့ ငွေကြေးပိုမိုရောက်ရှိစေခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့အား အသုံးအစွဲ ပိုမိုမြင့်တက်အောင် ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ ကုန်ပစ္စည်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှု ၀ယ်လိုအားမြင့်တက်လာပြီး လုပ်ငန်းများအား ရောင်းလိုအားမြင့်တက်အောင် ပြုလုပ်ရန် လှုံ့ဆော်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ရောင်းလိုအား မြင့်တက်အောင် ထုတ်လုပ်သည့်အခါ လုပ်သားများ ငှားရမ်းမှု မြင့်တက်လာမည် ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများကို ဖန်တီးပုံနှင့် စီးပွားရေးရောင်နီသန်းလာအောင် ပြုလုပ်ပုံဖြစ်သည်။
အစိုးရအနေဖြင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ခြင်းကဲ့သို့သော စီမံကိန်းများကို စတင်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်လည်း အလုပ်လက်မဲ့များအား အလုပ်ရရှိအောင် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ယင်းသည်လည်း ပြည်သူလူထု၏ အိတ်ကပ်ထဲသို့ ငွေကြေးများထည့်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့အား ငွေကြေးသုံးစွဲမှုပြုလုပ်ရန် အားပေးကာ စီးပွားရေးကို နွှေးပေးခြင်း ဖြစ်သည်။
၎င်းအပြင် ကြီးမားသော ကုမ္ပဏီများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ရေး မလုံလောက်အောင် သေးငယ်လွန်းသည်ဟု ယူဆရသော အချို့သောလုပ်ငန်းများမှ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကို ၀ယ်ယူအားပေးသည့် မူဝါဒမျိုးကိုလည်း ကျင့်သုံးနိုင်သည်။ ယင်းသည် အစိုးရက ၎င်းတို့အား ငွေကြေးရရှိရေးအတွက် ကူညီရန် ရည်ရွယ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယင်းကဲ့သို့ အားပေးသင့်သည့် လုပ်ငန်းများအား ရွေးချယ်ရန် တိကျသည့် သတ်မှတ်ချက်များ ရှိထားရမည် ဖြစ်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါ ဥပမာများသည် စီးပွားရေးအနေအထားအလိုက် အစိုးရအနေဖြင့် သြဇာသက်ရောက်ကာ ၀င်ရောက်ထိန်းချုပ်နိုင်ပုံ နည်းလမ်းအနည်းငယ်မျှသာ ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းတစ်ရပ်နှင့် ရင်ဆိုင်ရချိန်၌ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အနေအထားနှင့် ကိုက်ညီသော မူဝါဒများချမှတ်ကာ အစိုးရက မဖြစ်မနေ ဖြေရှင်းပေးရမည်သာ ဖြစ်ပါကြောင်း The Daily Eleven သတင်းစာက ရေးသားအပ်ပါသည်။
(ဇူလိုင် ၂၁ ရက်နေ့ထုတ် The Daily Eleven သတင်းစာ အယ်ဒီတာ အာဘေ်ာ)
Posted in EditorialsTagged စီးပွားရေးLeaveaComment on စီးပွားရေး အနေအထားနှင့် အစိုးရ၏ သြဇာသက်ရောက်မှု
ဒေါ်လာဈေးဂယက်၊ ကုန်ဈေးနှုန်းအတက်နှင့် ရုန်းထနိုင်ရန် မမြင်သေးသော မြန်မာ့စီးပွားရေး
၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လနောက်ပိုင်းမှစ၍ အတက်အကျနည်းပါး ခဲ့သည့် နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်း ဒေါ် လာဈေးသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇွန်လ ဒုတိယပတ်မှစတင်ကာ ပြန်လည် လှုပ်ခတ်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက် တွင် ဒေါ်လာဈေး အားကောင်းနေသောကြောင့် ပြည်တွင်းဈေးကွက်တွင် နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းနှစ်ပတ် ကျော်အတွင်း ကျပ် ၆၀ ခန့်မြင့်တက် ခဲ့ပြီး တစ်ဒေါ်လာ ၁၄၀၇ ကျပ်အထိ ရောက်ခဲ့ကာ စံချိန်တင်ဈေးနှုန်းကို ချိုးနိုင်ရန် ကျပ် ၃၀ ၀န်းကျင်သာ လိုတော့ခြင်းဖြစ်သည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလမှစတင်ကာ ကမ္ဘာ့ဒေါ်လာဈေးအညွှန်းကိန်း သိ သိသာသာ ပြန်လည်မြင့်တက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာကျပ်ငွေ အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာငွေကြေး တန်ဖိုးများအပေါ် သက်ရောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ၂၀၁၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလနောက်ပိုင်း ၂၀၁၇ ဇန်န၀ါရီ ၃ ရက်တွင် ၁၀၃ ဒသမ ၈၂ ပွိုင့် အထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်န ၀ါရီ ၂၅ ရက်တွင် ၈၈ ဒသမ ၆၃ ပွိုင့် အထိကျဆင်းခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့် ငါးလအတွင်း အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ သော ကမ္ဘာ့ဒေါ်လာဈေးညွှန်းကိန်း များမှာ ဒီဇင်ဘာလတွင် ၉၄ ဒသမ ၁၈ ပွိုင့်၊ ဇန်န၀ါရီလတွင် ၉၂ ဒသမ ၃၆ ပွိုင့်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ၉၀ ဒသမ ၄၃ ပွိုင့်၊ မတ်လတွင် ၉၀ ဒသမ ၃၇ ပွိုင့်၊ ဧပြီလတွင် ၉၁ ဒသမ ၇၁ ပွိုင့်၊ မေလတွင် ၉၄ ဒသမ ၈၃ ပွိုင့်ဖြစ်ပြီး ဇွန် ၂၁ ရက်တွင် ၉၅ ဒသမ ၁၆ ပွိုင့်ဝန်းကျင်၊ ဇွန် ၂၈ ရက် တွင် ၉၅ ဒသမ ၂၁ ပွိုင့်ဝန်းကျင်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ပြည်တွင်းဈေးကွက်၌ ငါးလအတွင်း လအလိုက်ဖြစ်ပေါ်သော နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်း အနိမ့်ဆုံးနှင့် အမြင့်ဆုံးနှုန်းများမှာ ဇန်န၀ါရီတွင် ၁၃၂၃-၁၃၅၄ ကျပ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ လတွင် ၁၃၂၃-၁၃၃၁ ကျပ်၊ မတ်လ တွင် ၁၃၂၆-၁၃၃၄ ကျပ်၊ ဧပြီလ တွင် ၁၃၂၄-၁၃၃၂ ကျပ်၊ မေလတွင် ၁၃၃၂-၁၃၅၁ တို့ဖြစ်ပြီး ဇန်န၀ါရီ တွင် ကွာဟချက်အများဆုံးဖြစ်ပေါ် ခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့် မတ်လအတွင်း အ မြင့်ဆုံးဈေးနှုန်းအဖြစ် မတ် ၂၁ ရက် တွင် ၁၃၃၄ ကျပ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ဒေါ်လာဈေးသည် မတ် ၂၉ ရက်တွင် ၁၃၂၈ ကျပ်အထိ၊ ဧပြီလဆန်းတွင် ၁၃၂၄ ၀န်းကျင်အထိ ကျဆင်းခဲ့ သည်။ ထို့ နောက် ဧပြီလကုန်ပိုင်း ၂၈ ရက်တွင် ၁၃၃၁ ကျပ်၊ မေ ၂၁ ရက် တွင် ၁၃၅၁ ကျပ်အထိ မြင့်တက်ခဲ့ပြီး ဇွန် ၁၁ ရက်တွင် ၁၃၄၆ ကျပ်၊ ဇွန် ၁၅ ရက်တွင် ၁၃၅၅ ကျပ်၊ ဇွန် ၁၆ ရက် တွင် ၁၃၆၅ ကျပ်၊ ဇွန် ၂၀ ရက်တွင် ၁၃၆၈ ကျပ်၊ ဇွန် ၂၁ ရက်တွင် ၁၃၇၅ ကျပ်၊ ဇွန် ၂၆ ရက်တွင် ၁၃၈၃၊ ဇွန် ၂၇ ရက်တွင် ၁၃၉၅၊ ဇွန် ၂၈ ရက်တွင် ၁၄၀၇ ကျပ်ဝန်းကျင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင် သမိုင်းတစ်လျှောက် အမြင့်ဆုံး ငွေလဲနှုန်းထားအဖြစ် ၁၄၃၈ ကျပ် အထိ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇွန် ၂၈ ရက်တွင် ဖြစ်ပေါ်သော တစ် ဒေါ်လာ ၁၄၀၇ ကျပ် ဈေးနှုန်းသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာနောက်ပိုင်း အမြင့်ဆုံးဈေးနှုန်းဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ထုတ်ပြန်ထား သော စီးပွားရေးဆိုင်ရာအစီရင်ခံ စာများအရ မြန်မာနိုင်ငံ ၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှုန်းသည် ၂၀၁၃ -၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ၈ ဒသမ ၄ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ် တွင် ရှစ်ရာခိုင်နှုန်းရှိရာမှ ရွေးကောက် ပွဲနှင့် အစိုးရအပြောင်းအလဲကာလ များဖြစ်သော ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာ နှစ်တွင် ခုနစ်ရာခိုင်နှုန်း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ၅ ဒသမ ၉ ရာ ခိုင်နှုန်းအထိ ကျဆင်းခဲ့ကာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ၆ ဒသမ ၄ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် တွင် ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပြန် လည်မြင့်တက်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ စီးပွား ရေးတိုးတက်မှုနှုန်း တက်ရိပ်ပြလာ ချိန်တွင် ဒေါ်လာဈေးမြင့် တက်လာ ခြင်းကြောင့် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းနှင့် ကုန်ဈေးနှုန်းများလည်း မြင့်တက်ကာ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းကို အားပျော့စေနိုင်သည်။
နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းအတက် အကျသည် နိုင်ငံခြားငွေဝယ်လိုအားနှင့် ရောင်းလိုအားကို သက်ရောက် စေနိုင်သောအကြောင်းရင်းများ အ ပေါ်တွင် အခြေခံပြီး အဓိကကျသည့် အချက်များမှာ နိုင်ငံခြားငွေကြေးဈေး ကွက်အခြေအနေ၊ နိုင်ငံ့ပို့ကုန်သွင်း ကုန်ပမာဏ၊ နိုင်ငံ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်မှုနှုန်း၊ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း အခြေအနေ၊ စီးပွားရေးစနစ်အတွင်း ရှိ ကုန်စည်နှင့် ၀န်ဆောင်မှုများ၏ ဈေးနှုန်းအခြေအနေတို့ ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိအခြေအနေ မှာ ကုန်သွယ်ရေးလိုငွေ၊ ဘတ်ဂျက် လိုငွေများပြားနေသည့်အပြင် စီးပွား ရေးတိုးတက်မှုနှုန်းမှာလည်း ၂၀၁၆ မတိုင်ခင်နှစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက လျော့နည်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်း အချိန်တွင် ဒေါ်လာဈေး မြင့်တက်မှု ကြောင့် သွင်းကုန်ဈေးနှုန်းများ၊ အထူး သဖြင့် ဈေးကွက်အတွင်းသုံးစွဲမှုများ ပြားသော စက်သုံးဆီ၊ ဆက်သွယ်ရေး ပစ္စည်း၊ ဆေးဝါး၊ အစားအစာကဲ့သို့ ကုန်စည်များကို ဈေးနှုန်းမြင့်တက်စေ ပြီး ကုန်ဈေးနှုန်းနှင့် ငွေကြေးဖောင်း ပွမှုနှုန်းကို မြင့်တက်စေမည်ဖြစ်သည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလတွင် ပျမ်း မျှငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်း ၄ ဒသမ ၂၉ ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး ဧပြီလတွင် ဖြစ် ပေါ်ခဲ့သည့် ပျမ်းမျှငွေ ကြေးဖောင်း ပွမှုနှုန်းထက် ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ် မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း ဗဟိုစာရင်းအင်း အဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်သည့်စားသုံးသူဈေး ဆနှုန်းနှင့် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်း အခြေအနေတွင် ဖော်ပြထားသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလအထိ တစ် နှစ်အတွင်း ပျမ်းမျှငွေကြေးဖောင်းပွမှု နှုန်းမှာ ၄ ဒသမ ၂၉ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် ငွေကြေးဖောင်း ပွမှုနှုန်း ၄ ဒသမ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်း အနည်းငယ် ပြန်လည်မြင့်တက် လာခြင်းဖြစ်သည်။
တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် အခြေခံနှစ်ဖြင့် စားသုံးသူဈေး ဆနှုန်းအပေါ် အခြေခံတွက်ချက်ထား သော ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းမှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလအထိ တစ်နှစ် ပျမ်းမျှ ၄ ဒသမ ၂၉ ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလနှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ် မေလတို့၏ နှစ်အလိုက်ပြောင်းလဲမှု ကိုနှိုင်းယှဉ်ပါက (Year on Year Inflation) မှာ ၅ ဒသမ ၉ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလအတွင်း မန္တလေးမြို့တွင် ၈ ဒသမ ၅၁ ရာ ခိုင်နှုန်းဖြင့် ပျမ်းမျှငွေကြေး ဖောင်းပွမှုနှုန်း အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ၈ ဒသမ ၄၁ ရာခိုင် နှုန်းဖြင့် ဒုတိယအမြင့်ဆုံးဖြစ်ကာ ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီးတွင် ၅ ဒသမ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် တတိယအမြင့်ဆုံး ဖြစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလအထိ နှစ်အလိုက်ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းမှာ မန္တလေးမြို့တွင် ၁၁ ဒသမ ၃၈ ရာခိုင် နှုန်းဖြင့် ပြောင်းလဲမှု အများဆုံးဖြစ် ပေါ်ခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ တွင် ၂ ဒသမ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ပြောင်းလဲမှု ရာခိုင်နှုန်း အနည်းဆုံး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက် စားသုံးသူဈေးဆနှုန်းနှင့် ငွေကြေးဖောင်း ပွမှုနှုန်းကို ပြောင်းလဲတွက်ချက်တင် ပြနိုင်ရန် ၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့သည် အိမ် ထောင်စုဝင်ငွေနှင့် စားသုံးမှုစစ်တမ်းကို မြို့နယ်ပေါင်း ၈၂ မြို့နယ်တွင် နမူနာအိမ်ထောင်စုပေါင်း ၃၂ç၆၆၉ ကို စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယခင်က ၂၀၀၆ ခုနှစ်ကို အခြေခံ၍ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းကို တွက်ချက်ခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ ၂၀၁၂ ခုနှစ် စစ်တမ်းအပေါ် အခြေခံ၍ အခြေခံနှစ် (Base Year) အား ပြောင်းလဲတွက်ချက် ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်း လျော့ကျရန် ဘဏ္ဍာရေး၊ ငွေကြေး၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် နိုင်ငံခြားငွေထိန်းချုပ် ရေးမူဝါဒများအပေါ် အခြေခံပြီး မဖြစ်မနေ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဒုတိယကာလတို ငါးနှစ်စီမံကိန်း (၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၂၀ -၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်) တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းသည် ပထမကာလတို ငါးနှစ်စီမံကိန်း (၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၅ -၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ) ကာလ တွင် တိုးတက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဒုတိယကာလတိုငါးနှစ်စီမံကိန်း (၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၂၀- ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်) တွင် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေ သည့် ငွေကြေး ဖောင်းပွမှုနှုန်းလျော့ ကျစေရေးအတွက် ဘဏ္ဍာရေးမူ ၀ါဒ၊ ငွေကြေးမူဝါဒ၊ ကုန်သွယ်ရေး မူဝါဒနှင့် နိုင်ငံခြားငွေထိန်းချုပ်ရေး မူဝါဒများအပေါ်အခြေခံ၍ ငွေ ကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်း ထိန်းချုပ်ရေး ကိစ္စရပ်များအား မဖြစ်မနေဆောင် ရွက်သွားမည်ဟု ဆိုသော်လည်း လက်ရှိအချိန်အထိ လေးရာခိုင်နှုန်း ကျော်တွင် တည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ တစ်နှစ်ပျမ်းမျှ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းသည် ၂၀၀၆ ခုနှစ် အခြေခံနှစ်အရ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ၂ ဒသမ ၈၂ ရာခိုင် နှုန်း၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာ နှစ်တွင် ၂ ဒသမ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ၅ ဒသမ ၇၂ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာ နှစ်တွင် ၅ ဒသမ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အခြေခံနှစ်အရ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ၁၀ ဒသမ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ သည်။ ယင်း နောက်ပိုင်းငွေကြေးဖောင်းပွမှု နှုန်း တဖြည်းဖြည်းပြန်ကျခဲ့ရာ ၂၀၁၇ ခု နှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ၄ ဒသမ ၆၁ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ကျဆင်းခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လမှစ၍ ပျမ်းမျှ ငွေဖောင်းပွမှုနှုန်း ပြန်တက်ခဲ့ပြီး ဧပြီတွင် ၄ ဒသမ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၂၀၁၈ ခု နှစ် မေတွင် ၄ ဒသမ ၂၉ ရာခိုင်နှုန်းအထိ မြင့်တက်ခဲ့သည်။
ထို့အတူ ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်နှင့် သြဂုတ်တွင် နှစ်အလိုက် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်း (Year on Year Inflation) သုံးရာခိုင်နှုန်းအောက်သာ ရှိရာမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာမှ စတင်ကာ လေးရာခိုင်နှုန်းကို ကျော်လွန်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီတွင် ငါးရာခိုင်နှုန်းအထက်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီနှင့် မေတွင် ခြောက်ရာခိုင်နှုန်း နီးပါးအထိ မြင့်တက်ခဲ့ကာ နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်း၊ ဒေါ်လာဈေး မြင့်တက်ခဲ့သည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် မြင့်တက်ခဲ့သည့် ကုန်ဈေးနှုန်းများကြောင့် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်း မြင့်တက်စေဦးမည်ဖြစ်သည်။
စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်သော ၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလ အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ စားသုံးသူ ဈေးဆနှုန်းနှင့် ငွေကြေးဖောင်းပွမှု နှုန်းအခြေအနေအရ ပျမ်းမျှငွေကြေး ဖောင်းပွမှုနှုန်းများမှာ အစား အစာအုပ်စုတွင် ၃ ဒသမ ၅၂ ရာ ခိုင်နှုန်း၊ အစားအစာမဟုတ်သော အုပ်စုတွင် ၅ ဒသမ ၆၇ ရာခိုင်နှုန်း၊ အစားအစာနှင့် လောင်စာဆီ မပါဝင်သော စားသုံးသူဈေးဆနှုန်း (Core CPI) ၄ ဒသမ ၁၄ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
အစားအစာအုပ်စုအလိုက် အနေဖြင့် ဖြစ်ပေါ်သော ပျမ်းမျှငွေကြေး ဖောင်းပွမှုနှုန်းထားများမှာ အဖျော်ယမကာနှင့် ဆေးရွက်ကြီး ထွက်ပစ္စည်း ၁၁ ဒသမ ၀၄ ရာခိုင် နှုန်း၊ အ၀တ်အထည် ၁ ဒသမ ၆၂ ရာခိုင်နှုန်း၊ အိမ်လခနှင့် အိမ်ပြင်ခ ၅ ဒသမ ၄၂ ရာခိုင်နှုန်း၊ အိမ်အသုံး အဆောင်ပစ္စည်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်း သိမ်းရေးစရိတ် ၂ ဒသမ ၅၂ ရာခိုင် နှုန်း၊ ကျန်းမာရေး ၄ ဒသမ ၄၈ ရာ ခိုင်နှုန်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၉ ဒသမ ၄၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဆက်သွယ် ရေး ၈ ဒသမ ၁၇ ရာခိုင်နှုန်း၊ အပန်း ဖြေခြင်းနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ၀ ဒသမ ၈၁ ရာခိုင်နှုန်း၊ ပညာရေး ၀ ဒသမ ၉၁ ရာခိုင်နှုန်း၊ ပြင်ပအစားအသောက် ၆ ဒသမ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ အထွေထွေ ကုန်ပစ္စည်း ၃ ဒသမ ၈၅ ရာခိုင် နှုန်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး အဖျော်ယမကာနှင့် ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ပြင်ပအစားအသောက်၊ အိမ်လခ၊ အိမ်ပြင်ခနှင့် ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍတို့တွင် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်း မြင့်မားနေခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့အတူ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလ အတွက် တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက် စား သုံးသူဈေးဆနှုန်းမှာ အစားအစာ အုပ်စုအတွက် ၁၅၁ ဒသမ ၈၂၊ အစားအစာ မဟုတ်သော အုပ်စုအတွက် ၁၂၃ ဒသမ ၉၄ နှင့် အုပ်စုအားလုံး အတွက် ၁၄၀ ဒသမ ၂၄ ရှိပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလ (၁၃၉ ဒသမ ၈၂) နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၀ ဒသမ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်ခဲ့သည်။ စားသုံးသူ ဈေးဆနှုန်း၏ နှစ်အလိုက် ပြောင်းလဲမှု အခြေအနေမှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလ၏ စားသုံးသူဈေးဆနှုန်း မှာ ၁၄၀ ဒသမ ၂၄ ဖြစ်သဖြင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ် မေလ၏ အခြေအနေ ၁၃၂ ဒသမ ၄၂ နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၅ ဒသမ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်ခဲ့သည်။ အလားတူ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလ၏ အစားအစာနှင့် လောင်စာဆီ မပါဝင်သော စားသုံးသူဈေးဆနှုန်း (Core CPI)မှာ ၁၁၉ ဒသမ ၄၅ ဖြစ်ရာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် မေလ၏ Core CPI အခြေအနေ ၁၁၃ ဒသမ ၇၁ နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၅ ဒသမ ၀၅ ရာ ခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဇွန်လ ဒုတိယပတ်မှစတင်ကာ နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းများ နှစ်ပတ်ခန့် ဆက်တိုက်မြင့်တက်ခဲ့သဖြင့် ပြည်တွင်း၌ ဆေးဝါး၊ ပြည်ပမှ တင်သွင်းရသည့် ကုန်စည်အချို့ ဈေးနှုန်းမြင့်တက်ခဲ့သည်။
“ပြည်တွင်းကထုတ်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ ဆန်၊ဆီ၊ ဆား၊ ငရုတ်၊ ကြက်သွန် ဖြူ/နီ၊ အာလူးတို့ကတော့ အရမ်းကြီးဈေးထိုးတက် သွားတာမရှိဘူး။ ပြည်ပကနေသွင်း ရတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေတော့ ဈေး တက်တယ်။ ထိုင်းကလာတဲ့ မီးဖိုချောင်သုံး ကုန်ပစ္စည်းတွေကတော့ ဈေးတက်တယ်။ မြန်မာငွေတန်ဖိုး ကျလို့လားတော့ မပြောတတ်ဘူးလေ။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဒိုင်က ၀ယ်တဲ့ ဈေးထက်တော့ ဈေးနည်းနည်းတင်ပြီး ရောင်းတယ်။ ဒါမှလည်း အမြတ်ငွေကျန်မှာကိုး” ဟု တာမွေမြို့နယ် ကုန်စုံဆိုင်တစ်ခု၏ ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူက ပြောကြားသည်။
နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်း ဆက်တိုက်မြင့်တက်မှုကြောင့် ဆေးဈေးကွက်အတွင်း ဆေးဝါးအများစုဈေးနှုန်း မြင့်တက်နေပြီး လက်ကားရောင်းချသူများက ပြည်ပမှတင်သွင်းသည့် ဆေးဝါးအချို့ကို ကန့်သတ်ရောင်းချမှုများ ရှိနေကြောင်း ရွှေပြည့်စုံဈေးရှိ ဆေးလက်လီလက်ကား အရောင်းဆိုင်များမှ သိရသည်။
လက်ရှိ ဆေးဈေးကွက်အတွင်း ဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်မှုကြောင့် ဆေး ကုမ္ပဏီအချို့က ဆေးဝါးရောင်းချမှုကို ရပ်ဆိုင်းထားပြီး ကုမ္ပဏီဘက်မှ ဈေးနှုန်းအတက် အကျနှင့်ပတ်သက်၍ ဆေးရောင်းချသူများအား ပြန်လည် အသိပေးသွားမည်ဟု ပြောကြားထားကြောင်း ရွှေပြည့်စုံဈေးရှိ ဆေးလက်ကား အရောင်းဆိုင်များမှ သိရသည်။
“တစ်နေ့က ဈေးဆင်းဝယ်တော့ ပြည်ပက တင်သွင်းဆေးအချို့ကို ၀ယ်သလောက် ဒိုင်ကမရောင်း ဘူး။ ဘာလို့လဲမေးတော့ ပစ္စည်းနည်းနေတယ်။ ဈေးတက်မယ်ပေါ့။ အခုက ဒေါ်လာဈေးတွေလည်း တက် နေတော့ ဆေးကိုလုံးဝမရောင်းတာ မျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ ချွေရောင်းတဲ့သဘော ဖြစ်နေတယ်။ လိုသလောက်မရတော့ ပိုလိုချင်တဲ့သူက ဈေးပိုပေးဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။ ပုံမှန်အိမ်သုံး ဆေးဝါးတွေကိုတော့ အဲလိုမလုပ်ဘူး။ ပုံမှန်အတိုင်း ရောင်းပါတယ်” ဟု မြတ်မေတ္တာမွန်ဆေးဆိုင်မှ ဒေါ်မြင့်ရီက ပြောကြားသည်။
လက်ရှိ ဆေးဈေးကွက်အတွင်း ဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်မှုကြောင့် ဆေးကုမ္ပဏီအချို့က ဆေးဝါးရောင်းချမှုကို ရပ်ဆိုင်းထားပြီး ကုမ္ပဏီဘက်မှ ဈေးနှုန်းအတက်အကျနှင့် ပတ်သက်၍ ဆေးရောင်းချသူများအား ပြန်လည် အသိပေးသွားမည်ဟု ပြောကြားထားကြောင်း ရွှေပြည့်စုံဈေးရှိ ဆေးလက်ကား အရောင်းဆိုင်များမှ သိရသည်။
“ဒေါ်လာဈေးတက်ရင် ဆေးတွေကလည်း နည်းနည်းစီ တက်သွားကြတာ။ တချို့ကုမ္ပဏီတွေက မတက်ဘူးလေ။ ဆေးကတော့ အများသုံး ဆေးတွေပဲတက်တာ။ တချို့ကျတော့လည်း ကုမ္ပဏီတွေက အရောင်းပိတ်သွားကြတယ်။ ဒီလပိုင်းဆို အရောင်းတော်တော်ပါးတယ်။ မိုးတွင်းမို့လည်း မဟုတ်ဘူး။ အရောင်းက ပါးကိုပါးနေတာ။ ဆိုင်တိုင်းလိုလို ပါးနေတာ တွေ့ရတယ်” ဟုရွှေပြည့်စုံဈေးမှ နိုင်ငံခြား ဆေးမျိုးစုံ ရောင်းချနေသည့် သူဇာဆေးဆိုင်မှ မသူဇာက ပြောကြားသည်။
ပုဂ္ဂလိကနိုင်ငံခြားငွေလဲကောင်တာ တစ်ခုတွင် ငွေကြေးလဲလှယ်နေသည်ကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-ကြည်နိုင်)
ဆေးဈေးကွက်အတွင်း အရောင်းအ၀ယ်ပါးနေသည်မှာ ကာလတစ်ခု ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသည့် ငွေလဲနှုန်း အခြေအနေကြောင့် ကုမ္ပဏီအချို့က ဈေးတက်ရောင်းချင်ကြောင်း၊ သို့သော် လက်ရှိတွင် အရောင်းအ၀ယ် ပါးနေသဖြင့် မှိန်းပြီးသာ ဆက်လက်လုပ်ကိုင် နေကြရကြောင်း ရွှေပြည့်စုံဈေးတွင် နိုင်ငံခြားဆေးမျိုးစုံ ရောင်းချနေသူများက ဆိုသည်။
အချို့ကုန်စည်များ ဈေးနှုန်း မြင့်တက်ခဲ့သော်လည်း အချို့မှာမူ ပုံမှန်ဈေးနှုန်းများ အတိုင်းသာ ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
“လောလောဆယ်တော့ ဆီတွေ စားသောက်ကုန်အချို့တော့ ဈေးမတက်သေးပါဘူး” ဟု စမ်းချောင်းမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သူ မသီရိက ပြော ကြားသည်။
“ဟော့ပေါ့ဆိုင်တွေမှာလည်း ဈေးတက်တယ်။ အသားတစ်ပွဲကို ၂၀၀ တက်တယ်။ အသီးအရွက် ၅၀ တက်တယ်” ဟု ရန်ကုန်မြို့ခံတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလဆန်းက သင်္ကြန်မတိုင်ခင်ကာလ ဖြစ်သည့်အတွက် အခြေခံစားသောက်ကုန် ဈေးနှုန်းများ စတင်မြင့်တက်လာခဲ့ရာ သင်္ကြန်ကျော်ကာလတွင် သမ္မတသစ်ဦးဝင်းမြင့် တက်လာပြီးနောက် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား လစာတိုးမြှင့်ပေးမည်ဆိုသည့် သတင်းများကြောင့် ကုန်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်ခဲ့သည်။
စက်သုံးဆီဈေး မြင့်တက်လာခြင်း၊ ဒေါ်လာဈေး အခြေအနေများကြောင့်လည်း ပြီးခဲ့သည့် မေလအတွင်းက ပြည်တွင်း၌ ကုန်စည်အချို့ ဈေးနှုန်းလိုက်ပါ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။
“စားဆီ၊ စက်သုံးဆီဈေးတွေ တက်လာပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ တက်လာပါတယ်။ အခြား ကုန်ဈေးနှုန်းတွေကလည်း လစာတိုး အရှိန်နဲ့ တက်လာကြတယ်။ ကြက်သွန်၊ မီးဖိုချောင်သုံးသီးနှံဈေးတွေ လည်းတက်နေတယ်” ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးအသင်းချုပ်မှ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဦးနေလင်းဇင်က ပြောကြားသည်။
အခြေခံစားသောက်ကုန် အများစုမှာ ကုန်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်ပြီးနောက် ပြန်လည်ကျဆင်းလေ့ မရှိသဖြင့် လက်ရှိအချိန်တွင် အတက်ဈေးဘက်တွင်သာ ရှိနေခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်လများအတွင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် ကုန်စည်ဈေးနှုန်းများကို လေ့လာကြည့်ပါက သင်္ကြန်ကာလ မတိုင်မီ ကုန်ဈေးနှုန်း ဈေးကွက်အတွင်း အခြေခံ စားသောက်ကုန်များဖြစ်သည့် ဆန်၊ ဆီနှင့် သားငါး ဈေးမြင့်တက်ခဲ့သည်။
ဆန်ဈေးနှုန်းအနေဖြင့် ရွှေဘိုပေါ်ဆန်း တစ်ပြည်လျှင် ယခင် ကျပ် ၂၂၀၀-၂၅၀၀ မှ ကျပ် ၂၃၀၀ -၂၉၀၀၊ ယခင်တစ်အိတ်လျှင် ၅၃၀၀၀ မှ ၆၉၀၀၀၊ ဖျားပုံဆန်သစ် ရှယ်တစ်ပြည်လျှင် ယခင်ကျပ် ၁၈၀၀ -၂၀၀၀ မှကျပ်၁၉၀၀-၂၂၀၀၊ တစ် အိတ်လျှင် ယခင်ကျပ် ၄၅၀၀၀မှ ကျပ် ၅၀၀၀၀ သို့ အသီးသီး ဈေးတက်ခဲ့သည်။
ဆန်ကြမ်းဈေး အနေဖြင့် ဧည့် မထဆန်တစ်အိတ်လျှင် ယခင်ကျပ် ၂၄၀၀၀ မှ ကျပ် ၃၁၀၀၀၊ ဇီရာဆန် တစ်အိတ်လျှင် ယခင်ကျပ် ၂၄၀၀၀ မှ ကျပ် ၁၉၀၀၀ မှ ၃၀၀၀၀ ကျပ်သို့ ဈေးတက်ခဲ့သည်။
သား၊ ငါးဈေးနှုန်းများအနေ ဖြင့် မွေးမြူရေးကြက် တစ်ပိဿာလျှင် ယခင်ကျပ် ၅၀၀၀-၆၀၀၀ ကြား ရှိရာမှ ယခုကျပ် ၆၀၀၀-၇၀၀၀၊ ဗမာကြက် တစ်ပိဿာလျှင် ယခင် ကျပ် ၇၀၀၀-၈၀၀၀ ကြားမှ ၉၀၀၀ – ၁၀၀၀၀၊ ၀က်သားတစ်ပိဿာ လျှင် ယခင်ကျပ် ၆၀၀၀- ၁၀၀၀၀ ကြားမှ ကျပ် ၇၀၀၀မှ ၁၂၀၀၀၊ အမဲသား တစ်ပိဿာလျှင် ယခင်ကျပ် ၇၀၀၀-၉၀၀၀ကြားရှိခဲ့ရာ ကျပ် ၁၀၀၀၀ ကျော်အထိ ဈေးတက်ခဲ့သည်။
ကုန်ဈေးနှုန်းများအနေဖြင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ ဈေးနှုန်းသိသိသာသာ မြင့်တက်လာခြင်းဖြစ်ပြီး လေးနှစ်တာ ကာလအတွင်း ကုန်ဈေးနှုန်းများ ဈေးနှုန်း နှစ်ဆ၊ သုံးဆခန့်ဈေးနှုန်း မြင့်တက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကုန်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှု အနေဖြင့် ၂၀၁၅ နိုဝင်ဘာလ ရွေးကောက် ပွဲပြီးကာလအတွင်းမှ စတင်ကာ သုံးနှစ်တာ ကာလအတွင်း အခြေခံ စားသောက်ကုန် ဈေးနှုန်းများအနေဖြင့် စံချိန်တင်မြင့်တက် ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၁၅ နိုဝင်ဘာလမှ ထပ်မံစတင်မြင်တက်ခဲ့သည့် ကုန်ဈေးနှုန်းများသည်၂၀၁၆ ဧပြီ သင်္ကြန်မတိုင်မီကာလတွင် ဈေးနှုန်းထပ်မံ မြင့်ခဲ့သည်။
အခြေခံစားသောက်ကုန်စည်များ အနေဖြင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ကုန်ဈေးနှုန်းများ ဈေးနှုန်းစတင် မြင့်တက်လာခြင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၃- ၂၀၁၄ခုနှစ်အတွင်း ကုန်ဈေးနှုန်းများအနေဖြင့် မြင့်တက်ခဲ့သော်လည်း စံချိန်တင် မြင့်တက်ခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ပေ။
သုံးနှစ်တာကာလ ကုန်စည်ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်ခြင်း အကြောင်းအရင်းများမှာ ၀န်ထမ်းလစာတိုးခြင်း၊ ဒေါ်လာဈေး မြင့်တက်ခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်း အ၀င်နည်းခြင်းနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး စသည့်အခက်အခဲ များကြောင့် ဈေးနှုန်းမြင့်တက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ပြည်သူများအနေဖြင့် ကုန်ဈေးနှုန်း တစ်ဟုန်ထိုးမြင့်တက်သည့် ဒဏ်ကို ၂၀၁၃ ဇွန်လမှစတင်၍ ခံစားလာရခြင်းဖြစ်သည်။
သုံးနှစ်တာ ကာလအတွင်း မြင့်တက်ခဲ့သည့် အခြေခံ စားသောက်ကုန်စည်များ အနေဖြင့် တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ ဈေးနှုန်းသိသိသာသာ ပြန်လည်ကျဆင်းခြင်း မရှိသေးဘဲ ဈေးအနည်းငယ် အတက်အကျ ရှိရုံမျှသာ ရှိခဲ့သည်။
ထို့ပြင် အကောက်ခွန်နှုန်းများ ပြင်ဆင်သတ်မှတ် လိုက်ခြင်းကြောင့် ပြည်ပမှ တင်သွင်းသည့် အခြေခံ စားသောက်ကုန်အချို့ အကောက်ခွန် ပိုမိုပေးရမည် ဖြစ်သဖြင့် တင်သွင်းသူများက ဈေးတိုးရောင်းချ မည်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်မူ စားသုံးသူပြည်သူများသာ ဈေးနှုန်းကြီး မြင့်သည့်ဒဏ်ကို ခါးစည်းခံရမည် ဖြစ်သည်ဟု မြန်မာ့စီးပွားရေး လေ့လာသူများက သုံးသပ်ကြသည်။
စားသုံးသူဈေးဆနှုန်း၏ လအလိုက် ပြောင်းလဲမှု အခြေအနေမှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အခြေခံနှစ်ဖြင့် တွက်ချက်ထားသော ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလအတွက် တစ်နိုင်ငံလုံး၏ စားသုံးသူ ဈေးဆနှုန်းမှာ အစားအစာအုပ်စု အတွက် ၁၅၁ ဒသမ ၅၇၊ အစား အစာမဟုတ်သော အုပ်စုအတွက် ၁၂၃ ဒသမ ၂၉ နှင့် အုပ်စုအားလုံး အတွက် ၁၃၉ ဒသမ ၈၂ ရှိကြောင်း၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လ၏အခြေအနေ မှာ ၁၃၉ ဒသမ ၁၁ ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ က ၀ ဒသမ ၅၁ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်လာကြောင်း၊ Core Inflation တွက်ချက်ရန် လိုအပ်သည့် အစားအစာ အုပ်စုနှင့် လောင်စာဆီဈေးနှုန်းများ မပါဝင်ဘဲ တွက်ချက်ထားသော စားသုံးသူဈေးဆနှုန်း (Core CPI) မှာ ၁၁၉ ဒသမ ၀၈ ဖြစ်ရာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လ၏ Core CPI ဖြစ်သည့် ၁၁၈ ဒသမ ၈၃ နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ၀ ဒသမ ၂၁ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ကြောင်း စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်း အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ထားသည်။
စားသုံးသူဈေးဆနှုန်း၏ နှစ်အလိုက် ပြောင်းလဲမှု အခြေအနေမှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလ၏ စားသုံးသူဈေးဆနှုန်းမှာ ၁၃၉ ဒသမ ၈၂ ဖြစ်သဖြင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလ၏ အခြေအနေ ၁၃၂ ဒသမ ၀၇ နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၅ ဒသမ ၈၇ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်လာသည်။ အလားတူ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလ၏ Core CPI မှာ ၁၁၉ ဒသမ ၀၈ ဖြစ်ရာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလ၏ Core CPI အခြေအနေ ၁၁၃ ဒသမ ၆၄ နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၄ ဒသမ ၇၈ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လတွင် အစားအစာအုပ်စု (Food) ၏ဈေးဆနှုန်း မှာ ၁၅၁ ဒသမ ၅၇ ဖြစ်သဖြင့် ယခင်လကထက် ၀ ဒသမ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်လာသည်။ အခြေခံ စားသောက်ကုန်များဖြစ်သည့် အမဲသားဈေးနှုန်း ကျဆင်းလာသော်လည်း ဆန် (ဧည့်မထ)၊ စားအုန်းဆီ၊ အသား ငါးဈေးနှုန်းများနှင့် ကြက်ဥဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်လာကြောင်း၊ အခြားမီးဖိုချောင်သုံး ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်သည့် ပဲဈေးနှုန်းများ၊ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ အာလူးနှင့် သကြားဈေးနှုန်းများ ကျဆင်းလာကြောင်း၊ အသီးအနှံနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များဖြစ်သော သင်္ဘောသီး၊ ရှောက်သီး၊ သံပရာသီး၊ ချဉ်ပေါင်ရွက်၊ ပဲတောင့်ရှည်သီး၊ သခွားသီး၊ ခရမ်းသီး၊ ဂေါ်ဖီနှင့် ခရမ်းချဉ်သီး ဈေးနှုန်းများလည်း သိသိသာသာ မြင့်တက်နေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် အစားအစာ မဟုတ်သောအုပ်စု (Non Food) ၏ ဈေးဆနှုန်းမှာ ၁၂၃ ဒသမ၂၉ ဖြစ်သဖြင့် ယခင်လနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၀ ဒသမ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်နေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ယင်းအုပ်စုအတွင်းရှိ ဆေးဈေးနှုန်းများ၊ ကွမ်းသီးနှင့် ကွမ်းရွက်ဈေးနှုန်းများ သိသိသာသာ ကျဆင်းနေသော်လည်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီနှင့် မော်တော်ဆိုင်ကယ် ဈေးနှုန်းများ၊ ရွှေထည်ပစ္စည်း ဈေးနှုန်းများ၊ အမျိုးသမီး/အမျိုးသားဝတ် လုံချည်များ၊ ရှပ်အင်္ကျီ၊ တီရှပ်၊ စပို့ရှပ်၊ အမျိုးသမီးဝတ်အင်္ကျီ၊ ဖိနပ်များ၊ အိမ်ပြုပြင် စရိတ်၊ ရေခဲသေတ္တာနှင့် အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းများစသည့် ကုန်ပစ္စည်း ဈေးနှုန်းများမှ ယခင်လကထက် မြင့်တက်လာကြောင်း ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်ထားသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလအထိ ပျမ်းမျှငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်း (Annual Rate of Inflation) မှာ ၄ ဒသမ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီး အစားအစာအုပ်စုနှင့် လောင်စာဆီဈေးနှုန်းများ မပါဝင်ဘဲ တွက်ချက်ထားသော ပျမ်းမျှငွေကြေး ဖောင်းပွမှုနှုန်း (Core Inflation) မှာ ၃ ဒသမ ၉၆ ရာခိုင်နှုန်းရှိကြောင်း သိရသည်။
အစိုးရသစ် တက်လာပြီးနောက် မြန်မာ့စီးပွားရေး ဦးမော့လာရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော်လည်း နှစ်နှစ်တာ ကုန်လွန်သွားချိန်၌ စီးပွားရေး တိုးတက်မလာသည့်အပြင် ပြိုလဲမသွားအောင်ပင် ရုန်းကန်နေရသည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အများစုက မြန်မာ့စီးပွားရေး အနာဂတ်အတွက် မှန်းဆရခက်ပြီး ထိလွယ်ရှလွယ် ဖြစ်နေသည်ဟု ဆိုကြသည်။
လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အခြေအနေတွင် လုပ်ငန်းရှင်များ လုပ်ရကိုင်ရ ပိုမိုခက်ခဲနေသည်။ မြန်မာ့စီးပွားရေး တိုးတက်မှုနှုန်း ကြီးကြီးမားမား လျော့နည်းသွားမည် ဆိုပါက မက်ခရိုစီးပွားရေး မတည်ငြိမ်မှု ကြီးထွားလာနိုင်ကာ နိုင်ငံ၏ အထွေထွေ မတည်ငြိမ်မှုကို ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ထုတ်ပြန်သည့် မြန်မာ့စီးပွားရေး စောင့်ကြည့် အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
“ဒီအချိန်က ကုစားရင် မီပါသေးတယ်။ လုပ်တဲ့သူတွေကို ဥပဒေနဲ့ အကာအကွယ်ပေးပါ။ ဈေးကွက်စီးပွားရေးအရ Floating ဖြစ်နေတာကို နားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သဘာဝမကျတဲ့ ဟာမျိုးတွေကို ထိန်းညှိပေးပါ။ ဒါဆိုရင်ရပါပြီ။ နိုင်ငံတော်က ဘာမှကုန်ကျစရာ မလိုပါဘူး။ လုပ်တတ်တဲ့သူကိုသာ ခေါင်းဆောင်တင်ပြီး လုပ်ခိုင်းပါ။ အရည်အချင်း ရှိတဲ့သူတွေ မြန်မာပြည်မှာ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဒီလူတွေကို တာဝန်ပေးပါ။ ရန်ကုန်တိုင်းမှာ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းပေါလို့ ဒီမှာလာနေကြပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ အများကြီး တိုးတက်အောင် တခြားနိုင်ငံတွေမှာ လုပ်ပေးနေတာတွေကို တွေ့နေတာပဲဗျာ။ ဗီယက်နမ်တွေ တိုးတက်သွားတယ်။ ကမ္ဘောဒီးယား တိုးတက်သွားတယ် ဘာလုပ်ထားသလဲ။ သူတို့အတိုင်း လိုက်လုပ်ပေးရုံပဲ။ ဒါကို ဆိုလိုတာ။ ကျွန်တော်က ဒါလေးတော့ မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ” ဟု လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက ဆိုသည်။
ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှု၊ စားဝတ်နေရေးခက်ခဲမှု၊ ၀င်ငွေနှင့် အသုံးစရိတ် မမျှတမှုနှင့် ဒေါ်လာဈေး မြင့်တက်မှုများကြောင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးမှာ ရပ်တန့်နေသည်ဟု ဆိုခြင်းထက် ကျဆင်းနေသည်ဟု ပြောဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး ထိုသို့ကျဆင်းမှုတွင် အစိုးရ၌ အဓိက တာဝန်ရှိကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနတွင် ဒုတိယ၀န်ကြီး ဖြစ်ခဲ့သူ ဒေါက်တာပွင့်ဆန်းက ဇွန် ၂၉ ရက်တွင် ပြောကြားသည်။
နိုင်ငံ့စီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေကြောင်း နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားအပြီးတွင် ပြည်သူလူထုအကြား ကျပ်တည်းမှုများကြောင့် မြန်မာ့စီးပွားရေး ရပ်တန့်နေကြောင်း သုံးသပ်မှုများ ရှိနေပြီး ထိုသို့တန့်နေသည် ဆိုသော်လည်း ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှု၊ စားဝတ်နေရေးခက်ခဲမှု၊ ၀င်ငွေနှင့် အသုံးစရိတ် မမျှတမှုနှင့် ဒေါ်လာဈေး မြင့်တက်မှုများကြောင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးမှာ ရပ်တန့်နေသည် ဆိုခြင်းထက် ကျဆင်းနေသည်ဟု ပြောဆိုရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင်လည်းဖြစ်သူ ဒေါက်တာပွင့်ဆန်းက သုံးသပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“စီးပွားရေးက ရပ်တန့်နေတယ်။ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေက ကြီးမြင့်နေတယ်။ စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲမှုတွေရှိတယ်။ ၀င်ငွေနဲ့ အသုံးစရိတ်တွေက မမျှတဘူး။ ဒေါ်လာဈေးကလည်း စံချိန်တင် မြင့်တက်သွားပြီ (ငွေလဲလှယ်နှုန်းက)။ ဒါတွေက အမှန်တွေပဲပေါ့။ ဒီပြယုဂ်တွေ အခြေခံ ကြောင်းခြင်းရာတွေ ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး အခြေအနေ မကောင်းဘူး။ ရပ်တန့်နေတယ် ဆိုတာထက်ကို ကျဆင်းနေတယ်လို့တောင် ပြောလို့ရပါတယ်။ ရပ်တန့်နေတာ မဟုတ်ဘူး ကျဆင်းနေတာပါ” ဟု ဒေါက်တာပွင့်ဆန်းက ဆိုသည်။
ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်း အနေအထားမှာ ယခင်နှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် လျော့ကျသွားသည်ဟု ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ မြန်မာ့စီးပွားရေး လေ့လာမှု အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
မြန်မာကျပ်ငွေ တန်ဖိုးမှာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ အတွင်း အနည်းငယ် တန်ဖိုးတက်လာသည်။ ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်၏ ပထမနှစ်ဝက်ကာလတွင် ဈေးနှုန်းများသည် အသင့်အတင့်သာ မြင့်တက်ခဲ့သော်လည်း ဒုတိယနှစ်ဝက် ကာလတွင် ပိုမိုလျင်မြန်စွာ မြင့်တက်ခဲ့သည်။ အစားအသောက်နှင့် လောင်စာဆီဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်ခဲ့ရခြင်းမှာ အထူးသဖြင့် ကမ္ဘာ့လောင်စာဆီ ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်ခဲ့၍ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသည့် နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်း မတည်မငြိမ် ဖြစ်နေခြင်းက ပြည်သူအများစုအပေါ် သက်ရောက်နေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် အများအားဖြင့် သွင်းကုန်များအပေါ်တွင်သာ အားထားသုံးစွဲ နေရသဖြင့် ဒေါ်လာဈေး မြင့်တက်မှုနှင့် စက်သုံးဆီဈေး မြင့်တက်မှုများက ပြည်သူလူထုအပေါ် အကြီးအကျယ် ရိုက်ခတ်လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် မြန်မာ့စီးပွားရေး စောင့်ကြည့်အစီရင်ခံစာတွင် မြန်မာ့စီးပွားရေး တိုးတက်မှုနှုန်း ကြီးကြီးမားမား လျော့နည်းသွားမည် ဆိုပါက မက်ခရိုစီးပွားရေး မတည်ငြိမ်မှု ကြီးထွားလာနိုင်ကာ နိုင်ငံ၏ အထွေထွေ မတည်ငြိမ်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း သုံးသပ်ခဲ့သည်။
မြန်မာ့စီးပွားရေး ကျဆင်းနေသဖြင့် ပြည်သူများ၏ ၀ယ်ယူစားသုံးနိုင်စွမ်း ကျဆင်းနေချိန်တွင် မြွေပူရာ ကင်းမှောင့်သကဲ့သို့ ဒေါ်လာဈေး၊ စက်သုံးဆီဈေးနှင့် ကုန်ဈေးနှုန်း မြင့်တက်မှုများကသာ ထပ်ဆင့်ထိုးနှက်ပါက ကျပ်တည်းလာသည့် ပြည်သူများအကြား ကမ္ဘာ့ဘဏ် သုံးသပ်ထားသကဲ့သို့ အထွေထွေ မတည်ငြိမ်မှု ဆိုက်ရောက်လာမည်ကို သတိပြုပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း အကြံပြုလိုပါသည်။
Posted in FeaturesTagged ကုန်ဈေးနှုန်း, စီးပွားရေး, ဒေါ်လာဈေးLeaveaComment on ဒေါ်လာဈေးဂယက်၊ ကုန်ဈေးနှုန်းအတက်နှင့် ရုန်းထနိုင်ရန် မမြင်သေးသော မြန်မာ့စီးပွားရေး
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲကြားမှာ စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာကျပ်ငွေ အတက်အကျ
Posted on June 24, 2018 June 25, 2018 by စည်သူအောင်
ရန်ကုန်မြို့ မြို့နယ်တစ်ခုတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် နိုင်ငံခြားငွေကြေးလဲလှယ်မှုမြင်ကွင်း (ဓာတ်ပုံ – ကျော်ဇင်ဖြိုး)
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇွန် ၂၂ ရက်မှာ ဒေါ်လာဈေး ၁၃၇၆ ကျပ်၊ ပို့ကုန်ရငွေ တစ်ဒေါ်လာ ၁၃၈၄ ကျပ်အထိ မြင့် တက်ခဲ့ပြီး ၁၀ ရက်အတွင်း တစ် ဒေါ်လာ ကျပ် ၃၀ (၂ ဒသမ ၂၂ ရာ ခိုင်နှုန်း) မြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းနိုင်ငံခြားငွေကြေး ဈေးကွက်ဟာ ကာလအတန်ကြာ တည်ငြိမ်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခုမြင့်တက်ခဲ့တဲ့ ဒေါ်လာဈေးဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လဆန်းနောက်ပိုင်း အမြင့်ဆုံး နှုန်းထားဖြစ်ကာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တုန်း ကလို နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်း ဆက်တိုက်မြင့်တက် ဦးမလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရဦးမှာပါ။ နဂိုကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကုန်သွယ်မှုလိုငွေ များပြားမှု၊ ပို့ကုန်နည်းပါးမှု၊ ဘတ်ဂျက်လိုငွေ များပြားမှု၊ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအ၀င်နည်းမှု၊ စီးပွားရေး တိုးတက်မှုနှုန်း ကျဆင်းမှု၊ ဈေးကွက်အတွင်း ဒေါ်လာလိုအပ်ချက်များပြားမှု စတာတွေ ဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်မှာ ဒေါ်လာဈေးနှုန်း မြင့်တက်မှုက ပြည်တွင်းနိုင်ငံခြားငွေကြေး ဈေးကွက်ကို သိသိသာသာ ရိုက်ခတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
“ဒေါ်လာဈေးကတော့ သူက ကမ္ဘာသုံးငွေကြေးပါ။ နိုင်ငံအများ ဆုံးသုံးတဲ့ နိုင်ငံခြားငွေကြေးက ဒေါ်လာပဲ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ၀ယ်လိုအားတွေ ရောင်းလိုအားတွေ အရ၊ အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ မူဝါဒ အပြောင်းအလဲတွေအရ အတက်အကျဖြစ်တယ်။ အခု အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့ တရုတ်ကြားက အပြန်အလှန် ကုန်သွယ်ရေး တားဆီးမှုတွေ ဖြစ်လာတယ်။ ဥရောပနိုင်ငံတွေနဲ့လည်း ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အဖုအထစ်လေးတွေ ဖြစ်လာတယ်။ နောက်တစ်ခုက အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ Inflation Target၊ သူက နှစ်ရာခိုင်နှုန်း ထားတယ်ဆို နှစ်ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ Money Supply က ဘယ်လိုရှိမယ်၊ အခွန်စနစ်တွေ ဘယ်လောက်အထိ ပြောင်းလဲရမယ်၊ Target ထားတယ် ဆိုကတည်းက ဒီ Target ကို ပြည့်မီအောင်၊ ထိန်းနိုင်အောင် တခြားလိုအပ်တဲ့မူဝါဒ အပိုင်းအစလေးတွေ ပေါင်းစပ်ပြီးမှသာ Target ကို ထိန်းလို့ရတယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာမှ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းတွေ အများ ကြီးရှိတယ်။ သူတင်မဟုတ်ဘူး၊ သူ့နိုင်ငံတင် မဟုတ်ဘူး။ ကမ္ဘာသုံးငွေ ကြေးဖြစ်တော့ အားလုံးအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိတယ်” လို့ မူဝါဒဆိုင်ရာ စီးပွားရေးပညာရှင် ဒေါက်တာအောင်ကိုကိုက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
စီးပွားရေးပညာရှင် ဦးလှမောင်ကလည်း “အခုဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်မှုက အမေရိကန်-တရုတ် ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲ ဖြစ်နိုင်ခြေပေါ့။ အပြန်အလှန်သွင်းကုန်ခွန် ကောက်ခံမှုတွေဖြစ်လာတယ်။ အီးယူကလည်း ပါလာတယ်။ အဲဒီမှာ ဒေါ်လာဈေး က တခြားကမ္ဘာ့ငွေကြေးတွေနဲ့ ယှဉ် ရင် မြင့်လာတယ်။ တခြားငွေကြေး တွေတောင် တန်ဖိုးကျလာတော့ မြန်မာကျပ်ငွေလည်း ဘာခံနိုင်မလဲ၊ လိုက်ကျတာပေါ့။ အချိန်တိုအတွင်း ခုဂဏန်းတောင်မဟုတ်ဘူး၊ ဆယ် ဂဏန်း လိုက်ကျလာတယ်။ ကြားထဲက ရောင်တော်ပြန်နဲ့ ငွေကြေးဈေးကွက် လိုက်ကစားတဲ့သူတွေကြောင့် လည်းပါမှာပေါ့။ ဒေါ်လာဈေး တက် ရင် ပို့ကုန်သမားတွေအတွက် အခွင့် အလမ်းကောင်းပေမယ့် အခွင့်အရေး ယူနိုင်တဲ့သူပဲရမယ်။ သွင်းကုန်တွေကတော့ ဒေါ်လာဈေးတက်ရင် ဈေး တက်မယ်၊ အခုလို စက်သုံးဆီဈေး မြင့်တဲ့အချိန် ဒေါ်လာဈေး မြင့်လာတော့ ဈေးပိုတက်နိုင်ပြီး ကုန်ဈေးနှုန်းနဲ့ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းကို မြင့်တက်စေနိုင်တယ်” လို့ ဆိုပါတယ်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် မေနဲ့ ဇွန်နှစ်လ တာမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သိသိသာသာ အားပြန်ကောင်းလာပြီး သမိုင်းဝင် ထရမ့်နဲ့ ကင်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ ပြင်ဆင်ချိန်ကတည်းက ဒေါ်လာဈေး အညွှန်းကိန်းက အတက်ဘက်မှာ အားကောင်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့ မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအန်တို့ အစည်းအဝေး အပေါင်းလက္ခဏာ ရရှိခဲ့မှု၊ အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ် FED က အတိုးနှုန်းတိုးမြှင့်မှု၊ အတိုးနှုန်းထပ်တိုးဖို့ ပြင်ဆင်နေမှု၊ ဥရောပဗဟိုဘဏ် ECB က ၂၀၁၉ ခုနှစ်အထိ အတိုးနှုန်းတိုးမြှင့်ဖို့ အစီအစဉ်မရှိကြောင်း ထုတ်ဖော်မှု၊ အမေရိကန်နဲ့ တရုတ် အကြားအပြန်အလှန် ဒေါ်လာဘီလျံရာချီ တန်ဖိုးရှိတဲ့ သွင်းကုန်တွေ အခွန်ကောက်ခံမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ပထ၀ီနိုင်ငံရေး တင်းမာမှုတို့ကြောင့် ဒေါ်လာဈေး အညွှန်းကိန်း က ၁၁ လအတွင်း အမြင့်ဆုံးနှုန်း အဖြစ် ၉၅ ဒသမ ၂၀ ပွိုင့်အထိ ရောက်ရှိသွားခဲ့တာပါ။
အမေရိကန်နိုင်ငံ ရွေးကောက် ပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့၂၀၁၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလနောက်ပိုင်း ၂၀၁၇ ဇန်န၀ါရီ ၃ ရက်မှ ဒေါ်လာဈေးအညွှန်းကိန်း ၁၀၃ ဒသ မ ၈၂ ပွိုင့်အထိ မြင့်တက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ ၂၅ ရက် တွင် ၈၈ ဒသမ ၆၃ ပွိုင့်အထိ ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ငါးလအတွင်း အမြင့်ဆုံး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ဒေါ်လာဈေး ညွှန်းကိန်းတွေကတော့ ဒီဇင် ဘာမှာ ၉၄ ဒသမ ၁၈ ပွိုင့်၊ ဇန်န ၀ါရီမှာ ၉၂ ဒသမ ၃၆ ပွိုင့်၊ ဖေ ဖော်ဝါရီမှာ ၉၀ ဒသမ ၄၃ ပွိုင့်၊ မတ်မှာ ၉၀ ဒသမ ၃၇ ပွိုင့်၊ ဧပြီမှာ ၉၁ ဒသမ ၇၁ ပွိုင့်၊ မေမှာ ၉၄ ဒသမ ၈၃ ပွိုင့်ဖြစ်ပြီး ဇွန် ၂၁ ရက်တွင် ၉၅ ဒသမ ၂၀ ပွိုင့်အထိ ရောက်ရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်လာဈေး မြင့်တက်ခဲ့တာကြောင့် မြန်မာအပါအ၀င် အာရှနိုင်ငံအများစုရဲ့ ငွေကြေးတန်ဖိုးတွေ ကျဆင်းခဲ့ပြီး နဂိုကတည်းက စီးပွားရေး တိုးတက်မှု ကျဆင်းနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကျပ်ငွေတန်ဖိုးကတော့ ကျဆင်းမှုနှုန်း မြင့်မားတဲ့ နှုန်းထားမှာ ရှိနေပါတယ်။ ဒေါ်လာငွေ မာလာတာကြောင့် အာရှစီးပွားရေး အင်အားကြီး နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ သြစတြေးလျ၊ အိန္ဒိယ၊ တောင်ကိုရီးယားတို့ရဲ့ ငွေတန်ဖိုးတွေလည်း ကျဆင်းခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီ ၁၈ ရက်နဲ့ ဇွန် ၂၁ ရက် နှစ်လကျော် အတွင်းမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အာရှငွေကြေး တန်ဖိုးတွေကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် စင်ကာပူဒေါ်လာက ၃ ဒသမ ၆၆ ရာခိုင်နှုန်း၊ ထိုင်း ဘတ်က ၅ ဒသမ ၄၈ ရာခိုင်နှုန်း၊ မလေးရှားက ၃ ဒသမ ၄၄ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဗီယက်နမ် ဒေါင်က ၀ ဒသမ ၄၄ ရာခိုင်နှုန်း၊ လာအိုကစ်က ၁ ဒသမ ၂၉ ရာခိုင်နှုန်း၊ အင်ဒိုနီးရှား ရူပီယာက ၂ ဒသမ ၃၂ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဖိလစ်ပိုင်ပီဆိုက ၂ ဒသမ ၄၆ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဘရူနိုင်းဒေါ်လာက ၁၆ ဒသမ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ကမ္ဘောဒီးယားရီယဲလ် က ၁ ဒသမ ၄၄ ရာခိုင်နှုန်း တန်ဖိုး လျော့ကျခဲ့ပါတယ်။
အာရှစီးပွားရေး အင်အားကြီး နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ တရုတ်ယွမ်က ၀ ဒသမ ၃၄ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဂျပန်ယန်းက ၂ ဒသမ ၅၁ ရာခိုင်နှုန်း၊ အိန္ဒိယ ရူပီးက ၃ ဒသမ ၄၁ ရာခိုင်နှုန်း၊ တောင်ကိုရီးယားဝမ်က ၂ ဒသမ ၉၇ ရာခိုင်နှုန်း၊ သြစတြေးလျဒေါ်လာက ၅ ဒသမ ၇၁ ရာခိုင်နှုန်းတန်ဖိုး ကျ ဆင်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာ ကျပ်ငွေတန်ဖိုးက ဧပြီ ၁၈ ရက်မှာ တစ်ဒေါ်လာ ၁၃၂၅ ကျပ် ပေါက် ဈေးရှိခဲ့ပြီး ဇွန် ၂၂ ရက်မှာ ၁၃၇၆ ကျပ်အထိဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့် နှစ် လကျော်အတွင်း ၅၁ ကျပ်မြင့်တက် ခဲ့ပြီး ရာခိုင်နှုန်းအနေနဲ့ကြည့်ရင် ၃ ဒသမ ၈၄ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တန်ဖိုး ကျဆင်းခဲ့တာပါ။ ဒီနှုန်းထားတွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒေါ်လာနဲ့ ယှဉ်ရင် နိုင်ငံအများစုရဲ့ ငွေကြေးတန်ဖိုးတွေ အသီးသီး ကျဆင်းခဲ့တာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ပြင်ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာ အဓိက အရောင်းအ၀ယ်လုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံခြားငွေကြေးတွေရဲ့ ဧပြီ ၁၈ ရက်နဲ့ ဇွန် ၂၁ ရက်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ပေါက်ဈေးတွေကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့် မယ်ဆိုရင် အမေရိကန်ဒေါ်လာက ၃ ဒသမ ၇၇ ရာခိုင်နှုန်း၊ မလေးရှား ရင်းဂစ်က ၁ ဒသမ ၃၃ ရာခိုင်နှုန်း၊ ထိုင်းဘတ်က ၀ ဒသမ ၃၅ ရာခိုင် နှုန်း၊ တရုတ်ယွမ်က ၀ ဒသမ ၂၃ ရာ ခိုင်နှုန်းအထိ မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း ယူရိုက ၂ ဒသမ ၉၃ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဗြိတိန်ပေါင်က ၃ ဒသမ ၁၈ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဂျပန်ယန်းက ၁ ဒသမ ၂ ရာခိုင်နှုန်း၊ သြစတြေး လျဒေါ်လာက ၀ ဒသမ ၉၆ ရာခိုင် နှုန်း၊ စင်ကာပူဒေါ်လာက ၀ ဒသမ ၁၉ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။
လက်ရှိ NLD အစိုးရ စတင် တက်ရောက်တဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဧပြီ ၁ ရက်မှာ နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်း တစ် ဒေါ်လာ ၁၁၉၃ ကျပ်ဖြစ်ပြီး အစိုးရ သက်တမ်း ၂၆ လကျော်အတွင်း အနိမ့်ဆုံးငွေလဲနှုန်းအဖြစ် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဧပြီ ၂၄ ရက်မှာ ၁၁၅၃ ကျပ်၊ အမြင့်ဆုံး ငွေလဲနှုန်းအဖြစ် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်မှာ ၁၄၃၈ ကျပ် (နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်း သမိုင်းတစ်လျှောက် စံချိန်တင်နှုန်းထား) အထိ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ အနိမ့်ဆုံးနှုန်းနဲ့ အမြင့်ဆုံးနှုန်းတွေကို နှိုင်းယှဉ်ပါက ၂၈၅ ကျပ် မြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ရာခိုင်နှုန်း အနေနဲ့ဆိုရင် ကျပ်ငွေတန်ဖိုး ၂၄ ဒသမ ၇၁ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။ ကာလအလိုက် ကျပ်ငွေတန် ဖိုးကျဆင်းမှုကို ပြန်ကြည့်ပါက ၂၀၁၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာဒုတိယပတ် နောက် ပိုင်းမှ ဒီဇင်ဘာတတိယပတ်အတွင်း ကျဆင်းမှုနှုန်း ပိုမိုမြင့်မားပြီး တစ် လကျော်အတွင်း ၁၅၁ ကျပ်ဝန်းကျင် ကျဆင်းခဲ့ပြီး ရာခိုင်နှုန်းအနေနဲ့ကြည့်ရင် ၁၁ ဒသမ ၇၃ ရာခိုင် နှုန်းအထိ ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။
ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်း မြင့်တက်သလို လိုက်တက်နေသည့် အခြေခံစားသောက်ကုန်များ ရောင်းချနေသည့် မြင်ကွင်း
၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လနောက် ပိုင်းမှစပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇွန်လဆန်းအထိ နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းဟာ တစ်ဒေါ်လာ ၁၃၂၀ ကျော်မှ ၁၃၇၀ ကျော် ကြားမှာရှိပြီး လတစ်လအတွင်း အမြင့်ဆုံးဈေးနှုန်း ကွာခြားမှုကလည်း နည်းပါးခဲ့ပေမယ့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇွန်လအတွင်းမှာ ပြန်လည်လှုပ်ခတ်မှုတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။
ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ငါးလအတွင်း လအလိုက်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်း အနိမ့်ဆုံးနဲ့ အမြင့်ဆုံး နှုန်းတွေကတော့ ဇန်န၀ါရီမှာ ၁၃၂၃-၁၃၅၄ ကျပ်၊ ဖေဖော်ဝါရီမှာ ၁၃၂၃-၁၃၃၁ ကျပ်၊ မတ်မှာ ၁၃၂၆-၁၃၃၄ ကျပ်၊ ဧပြီမှာ ၁၃၂၄-၁၃၃၂ ကျပ်၊ မေမှာ ၁၃၃၂-၁၃၅၁ တို့ဖြစ်ပြီး ဇန်န၀ါရီမှာ ကွာဟချက် အများဆုံးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ တာပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လအတွင်းမှာ အ မြင့်ဆုံးဈေးနှုန်းအဖြစ် မတ် ၂၁ ရက် မှာ ၁၃၃၄ ကျပ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ဒေါ် လာဈေးဟာ မတ် ၂၉ ရက်မှာ ၁၃၂၈ ကျပ်အထိ၊ ဧပြီလဆန်းမှာ ၁၃၂၄ ၀န်းကျင်အထိ ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ဧပြီလကုန်ပိုင်း ၂၈ ရက် မှာ ၁၃၃၁ ကျပ်၊ မေ ၂၁ ရက်မှာ ၁၃၅၁ ကျပ်အထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီး ဇွန် ၉ ရက်မှာ ၁၃၄၆ ကျပ်၊ ဇွန် ၁၅ ရက် မှာ ၁၃၅၅ ကျပ်၊ ဇွန် ၁၆ ရက်မှာ ၁၃၆၅ ကျပ်၊ ဇွန် ၂၀ ရက်မှာ ၁၃၆၈ ကျပ်၊ ဇွန် ၂၂ ရက်မှာ ၁၃၇၆ ကျပ် အထိ မြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း အနိမ့်ဆုံးဖြစ် ပေါ်ခဲ့တဲ့ ၁၃၂၃ ကျပ်နဲ့ အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ၁၃၇၆ ကျပ်တို့နှိုင်းယှဉ်ရင် ၅၃ ကျပ် (လေးရာခိုင်နှုန်း) မြင့်တက် ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်း အတက်အကျဟာ နိုင်ငံခြားငွေဝယ်လိုအားနဲ့ ရောင်းလိုအားကို သက်ရောက်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေအပေါ် မှာ အခြေခံပြီး အဓိကကျတဲ့အချက် တွေကတော့ နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးဈေးကွက် အခြေအနေ၊ နိုင်ငံ့ပို့ကုန် သွင်းကုန်ပမာဏ၊ နိုင်ငံ့စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အခြေအနေ၊ ရသုံးမှန်းခြေ ငွေစာရင်းရှင်းတမ်း အခြေအနေ၊ စီးပွားရေးစနစ် အတွင်းရှိ ကုန်စည်နဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေရဲ့ ဈေးနှုန်း အခြေအနေတို့ဖြစ်ပြီး တစ်နည်းအားဖြင့် စီးပွားရေး စနစ်ထဲမှာရှိတဲ့ အတွင်း/အပြင် အခြေခံ အချက်တွေကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်က အကြီးတန်း တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးဈေးကွက် အခြေအနေကတော့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီးတွေအကြား ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲ အခြေအနေကြောင့် ဒေါ်လာဈေးညွှန်းကိန်းက စင်ပေါ်ပြန်ရောက်နေပြီး တခြားငွေကြေး တန်ဖိုးတွေ ကျဆင်းနေပါတယ်။ နိုင်ငံ့ကုန်သွယ်ရေး အခြေအနေက ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ လိုငွေဒေါ်လာ ၃၉၇၃ သန်းကျော်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေ အနေကလည်း အရင်နှစ်တွေထက် လျော့ကျလာပြီး ဘတ်ဂျက်လိုငွေကလည်း နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဖြစ်ပေါ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းဈေးကွက်ထဲရှိ ကုန်စည်နဲ့ ၀န်ဆောင်မှုဈေးနှုန်း တွေကလည်း ကုန်ကျစရိတ်များပြားမှုနဲ့အတူ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်း မြင့်မားနေတာကလည်း ကျပ်ငွေ တန်ဖိုးကို ကျဆင်းစေပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ စီးပွားရေးကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ဦးရဲမင်းဦးကလည်း “ မြန်မာနိုင်ငံက သွင်းကုန်အများဆုံး နိုင်ငံလို ဖြစ်နေတယ်။ ဒေါ်လာဈေးတက်ရင် လူတိုင်းကို ထိခိုက်နိုင်တယ်။ ဒေါ်လာဈေးတက်ရင် အဲဒါတွေ ဈေးတက်မယ်။ အဲဒါတွေ ဈေးတက်ရင် လူတန်းစားအားလုံးကို ထိခိုက်မယ်၊ တစ်နိုင်ငံလုံး စီးပွားပျက်မယ်။ အဲဒီအတွက် သက်သာအောင်၊ ခံသာအောင် ဘာလုပ်မလဲဆိုတာတော့ လုပ်လို့ရတယ်။ ဈေးမကျအောင်တော့ လုပ်လို့မရဘူး။ ဒါပေမဲ့ တက်သင့် တက်ထိုက်တဲ့ ပမာဏထက် မပိုအောင်တော့ လုပ်သင့်တယ်။ နောက်တစ်ခုက တက်တဲ့အတွက် ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေ အထိမနာအောင် အကြောင်းအရာလေး ရှာဖို့လိုတယ်” လို့ ပြောကြားထားပါတယ်။
အခုအချိန်မှာ တခြားငွေကြေးတွေနည်းတူ မြန်မာကျပ်ငွေဟာ ဒေါ်လာနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကျဆင်းနေပြီး ကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍမှာ သွင်းကုန်ပမာဏက ပို့ကုန်ပမာဏထက် ပိုများနေသလို ကုန်သွယ်ရေးလိုငွေပြမှု ကာလကြာရှည်စွာ ဖြစ်ပေါ်နေမှုကြောင့် ဒေါ်လာဝယ်လိုအား မြင့်တက်စေပြီး နိုင်ငံ့ငွေတန်ဖိုးကို ကျဆင်းစေပါတယ်။
“ကိုယ့်ငွေတန်ဖိုး ကျတဲ့အချိန်မှာ အစိုးရအနေနဲ့ ကိုယ့်အသုံးစရိတ် ကို ပြန်ဆန်းစစ်သင့်တယ်။ ဘတ်ဂျက်ပေါ့။ နှစ်တိုင်းလည်း လိုငွေပြ နေတော့ ဒီအချိန်မှာ မသုံးသင့်တာ မသုံး၊ မကုန်သင့်တာမကုန်အောင် ထိန်းချုပ်ရမယ်။ မလုပ်သင့် မလုပ်ထိုက်သေးတဲ့ စီမံကိန်းတွေကို ဆိုင်းငံ့သင့်တာဆိုင်းငံ့၊ ရပ်ဆိုင်းသင့်တာ ရပ်ဆိုင်းရမယ်။ ငွေကုန်ကြေးကျများတဲ့ စစ်ပွဲတွေ မဖြစ်အောင် လုပ်ရမယ်။ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးကလွဲလို့ ကျန်တဲ့အသုံးစရိတ်တွေ စိစစ်ချွေတာသင့်တယ်။ နောက်တစ်ခုက ၀င်ငွေတိုးအောင် လုပ်ရမယ်။ နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ ၀င်ငွေတိုးဖို့ အဓိကနည်းလမ်းဖြစ်တဲ့ ပို့ကုန်ရငွေတိုးအောင် လုပ်ရမယ်။ ပို့ကုန်ရငွေတိုးဖို့အတွက် နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေကို အားပေးရမယ်၊ အခွင့်အလမ်းတွေ ရှာဖွေပေးရမယ်။ ပြီးတော့ အခွန်ကောက်ခံမှုမှာ လစ်ဟာမှုမရှိအောင် နိုင်ငံတကာ အဆင့်အတန်းနဲ့အညီ ကောက်ခံရမယ်။ အခွန်ကောက်ခံမှုမှာ သူများနိုင်ငံတွေ ဘယ်လိုကောက်ခံနေသလဲ ကြည့်ဖို့ လိုသလို အခွန်ကောက်ခံမှုဟာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေနဲ့ အစိုးရအတွက် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးရှိအောင် ပြင်ဆင်သွားရမယ်။ ပြီးတော့ အစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာ အစိုးရတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေဆီကနေ Fund ပိုရအောင် လုပ်ရမယ်၊ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပိုဝင်အောင် လုပ်ရမယ်၊ ဟိုတယ်နဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေ တိုးတက်အောင် လုပ်ရမယ်။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်လို့ ကိုယ့်ဂျီဒီပီ တက်လာတဲ့အခါ ကိုယ့်ကျပ်ငွေရဲ့ တန်ဖိုးလည်း တက်လာမယ်။ ငွေတန်ဖိုးကို ဖိစီးစေတဲ့ သက်ရောက်မှုဒဏ်တွေကို ပိုပြီးခံနိုင်ရည် ရှိလာပါမယ်” လို့ ဦးလှမောင်က သုံးသပ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံထဲကို နိုင်ငံခြားငွေတွေ လုံလုံလောက်လောက် စီးဝင်လာမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံခြားငွေ ရောင်းချလိုတဲ့ ပမာဏများပြားလာပြီး နိုင်ငံခြားငွေအပေါ် ၀ယ်လိုအားနဲ့ ရောင်းလိုအားတို့ ညီမျှပြီး ငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေလည်း တည်ငြိမ်သွားနိုင်တာကြောင့် နိုင်ငံအတွင်းကို နိုင်ငံခြားငွေတွေ လုံလုံလောက်လောက် စီးဝင်စေဖို့ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်အနေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဌာနတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးနေဖို့ လိုတယ်လို့ ပညာရှင်တွေက သုံးသပ်ကြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကို နိုင်ငံခြားငွေတွေ လုံလုံလောက်လောက် စီးဝင်လာဖို့အတွက် ငွေတန်ဖိုးတက်လွန်း၊ ကျလွန်းမဖြစ်ဘဲ တည်ငြိမ်တဲ့နှုန်းဖြစ် ဖို့လိုပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်အထိတော့ အဓိကနိုင်ငံခြားငွေစီးဝင်မှုလမ်း ကြောင်းဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀င်ရောက်မှုကတော့ အရင်ဘဏ္ဍာနှစ်တွေနဲ့ယှဉ်ရင် ကျဆင်းနေပါတယ်။ ကုန်သွယ်ရေးပိုငွေပြဖို့၊ ပို့ကုန်တိုးတက်ဖို့ အတွက်လည်း အချိန်ယူရဦးမယ့် အနေအထား ဖြစ်နေပါတယ်။ ပြည်တွင်းဈေးကွက်ကို ကြည့်ရင်လည်း ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်း မြင့်တာကြောင့် ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ တက်နေတဲ့ အချိန်မှာ နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းကပါ မတည်မငြိမ် မြင့်တက်နေမယ်ဆိုရင် အခြေခံစားသောက်ကုန်၊ လူသုံးကုန် ဈေးနှုန်းတွေလည်း ဆက်မြင့်လာဦးမှာပါ။
အခုလို ဒေါ်လာလဲနှုန်း မြင့် တက်တဲ့အခါ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တွေအားလုံး အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေ ပြီး နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ ဈေးကွက် ထဲမှာ သွင်းကုန်ဈေးနှုန်းနဲ့ ကုန်ထုတ် လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ် မြင့်မားမှုဒဏ် တွေ ရိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်။ လုပ် ငန်းရှင်တွေ ခက်ခဲရင် ၀င်ငွေနည်း ပြည်သူတွေ အကျပ်အတည်းဖြစ်စေ မှာဖြစ်တဲ့အတွက် အစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံ့စီးပွားရေးအပေါ် ထိခိုက်မှုနည်းအောင် ကြိုတင်စီမံထားသင့်ပါတယ်။
“အဲဒီတော့ ဒေါ်လာဈေးသည် တက်ဈေး၊ ကျဈေး သူ့ဟာသူတော့ ရှိမှာပဲ။ ရုတ်ခြည်းတက်သွားခြင်း၊ ရုတ်ချည်းကျသွားခြင်းမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာတော့ နိုင်ငံ အစိုးရနဲ့ သက်ဆိုင်သွားတာပေါ့။ ဗဟိုဘဏ်နဲ့လည်း သက်ဆိုင်တာ ပေါ့။ စီးပွားရေးနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့ စီမံ/ဘဏ္ဍာတို့၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ် ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့အပြင် ဆောက်လုပ်ရေးနဲ့လည်း သက်ဆိုင်နေတာပဲ။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဆိုလည်း စီးပွားရေးနဲ့ သက်ဆိုင်တာပဲ။ လယ်ယာထွက်ကုန်တွေ ပြည်ပကို တင်ပို့တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပြည်ပက တင်သွင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒေါ်လာနဲ့ဆိုင်တာပဲ။ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနလည်း သက်ဆိုင်နေတာပဲ။ သွင်းကုန်တွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင် နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ထုတ်ကုန်တွေ ဘယ်လိုထုတ်မလဲ၊ ပို့ကုန်တွေ ဘယ်လိုမြှင့်တင်မလဲ သူနဲ့သက်ဆိုင်တာပဲ။ စီးပွားရေးနဲ့ သက်ဆိုင်နေတဲ့ ၀န်ကြီးဌာနတွေအကုန်လုံး၊ ဗဟိုဘဏ်လည်းပါတာပေါ့။ ဗဟိုဘဏ်နဲ့ပေါင်း စပ်ပြီးတော့ စီးပွားရေးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ၀န်ကြီးဌာနအားလုံး မြန်မာ့စီးပွားရေး အခြေအနေ၊ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး အခြေအနေတွေကို အမြဲသုံးသပ်နေဖို့ လိုတာပေါ့။ ဒေါ်လာဈေးနှုန်း အပြောင်းအလဲတွေ၊ ရေနံဈေးနှုန်း အပြောင်းအလဲတွေ၊ အခု တရုတ် OBOR ရဲ့ အကျိုးဆက်တွေ၊ တရုတ်ယွမ်ငွေရဲ့ ကျယ်ပြန့်လာမှုတွေ၊ တစ်ချိန်ချိန်မှာ တရုတ်ယွမ်ငွေက အခုထက် အားကောင်းလာတဲ့အခါ ကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့ တရုတ်နီးစပ်မှုတွေ၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အများဆုံး နိုင်ငံဖြစ်နေမှုတွေက ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် ဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေ ဖြစ်လာမလဲ၊ ဒေါ်လာနဲ့ ယွမ်ကြားက အားပြိုင်မှုတွေကြားမှာ ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် ဘယ်လိုအခွင့်အရေး ရယူမလဲဆိုတာ ပြင်ထားဖို့တော့ လိုမှာပေါ့” လို့ ဒေါက်တာအောင်ကိုကိုက သုံးသပ်ပါတယ်။
ဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်ပြီး နိုင်ငံ့ငွေတန်ဖိုး ကျဆင်းစေတဲ့ ကုန်သွယ်ရေးလိုငွေ၊ ဘတ်ဂျက်လိုငွေ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကျဆင်းမှု၊ နိုင်ငံခြား အရန်ငွေ နည်းပါးမှု၊ စီးပွားရေး တိုးတက်မှုနှုန်း ကျဆင်းမှု၊ ကုန်စည်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ၀န်ဆောင်မှု လျော့နည်းမှု၊ နိုင်ငံခြားငွေသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းတွေ အားနည်းမှုတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အားနည်းချို့ယွင်းချက်တွေကြောင့် ပြည်တွင်းပြည်ပက အကြောင်းတစ်ခုခုဖြစ်တိုင်း နိုင်ငံ့စီးပွားရေးအပေါ် သက်ရောက်မှုအား ကြီးမားနေတာ ဖြစ်တယ်။ လက်ရှိအစိုးရ တက်ရောက်ချိန်မှာ စီးပွားရေး ပိုပြီးတိုးတက်မယ်လို့ အားလုံးက မျှော်လင့်ခဲ့ပေမယ့် နိုင်ငံ့စီးပွားရေးကတော့ ချွတ်ခြုံကျနေဆဲဆိုတော့ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ အစိုးရ လက်ကျန်သက်တမ်းမှာ စီးပွားရေး အားကောင်းလာအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်မလား စောင့်ကြည့်ရပါဦးမယ်။
Posted in Features, HeadlineTagged စီးပွားရေး, နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်း, နိုင်ငံခြားငွေကြေးဈေးကွက်LeaveaComment on ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲကြားမှာ စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာကျပ်ငွေ အတက်အကျ
ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည့် အမေရိကန်နှင့် တရုတ်တို့၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်မှု၊ အကျိုးစီးပွားကာကွယ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် မူဝါဒများကြောင့် မြန်မာအပါအ၀င် အာဆီယံနိုင်ငံများသို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီးဝင်မှု တုံ့ဆိုင်းလျက်ရှိ
ကမ္ဘာ့အင်အားကြီး နိုင်ငံများဖြစ်သည့် အမေရိကန်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်မှု၊ အကျိုးစီးပွား ကာကွယ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် မူဝါဒများကြောင့် မြန်မာအပါအ၀င် အိမ်နီးချင်းအာ ဆီယံနိုင်ငံများသို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီးဝင်မှု တုံ့ဆိုင်းလျက်ရှိကြောင်း စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ အဓိကအားဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဟောင်ကောင်၊ ကိုရီးယား၊ ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများဖြစ်သည့် စင်ကာပူ၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်၊ မလေးရှားစသည့်နိုင်ငံများမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အများဆုံးဝင်ရောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည့် အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံကြား၌ စီးပွားရေးဆိုင်ရာပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်း ထန်သောဖြစ်စဉ် (Economic Tension ) များဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပြီး မိမိနိုင်ငံ၏ အကျိုးစီးပွားကာကွယ်သည့် အယူအဆများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များဆောင်ရွက်နေသဖြင့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အဓိကဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ယင်းနိုင်ငံများ၏မူဝါဒများကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် အာဆီယံနိုင်ငံများ၌ပါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီးဝင်မှုတွင် တုံ့ဆိုင်းမှုအခြေအနေများ ကြုံတွေ့လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀င်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အမှန်စာရင်းများ ရရှိရေး IMF ၏နည်းပညာ အကူအညီဖြင့် FDI Survey များပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်အနေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများအား စိစစ်ခွင့်ပြုရုံ သာမက အမှန်ဝင်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ လက်ရှိအချိန်တွင် ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းများ၏ သုံးလတစ်ကြိမ်တင် ပြသည့်အစီရင်ခံစာများအရ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အမှန်စာရင်းများ ပြုစုလျက်ရှိရာ ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဒေါ်လာ ၄၃၃၄ ဒသမ ၇၇၉ သန်းဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီမှ စက်တင်ဘာလအထိ ကြားကာလခြောက်လအတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ခွင့်ပြုပေးလျက်ရှိရာတွင် ဧပြီနှင့် မေနှစ်လအတွင်း သီလ၀ါအထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် ၀င်ရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးမြှင့်ခြင်းအပါအ၀င် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ ဒေါ်လာ ၁၉၃ ဒသမ ၃၅၆ သန်းအထိ ၀င်ရောက်မြှုပ်နှံထားသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလ ခြောက်လအတွင်း မေလအထိ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ခွင့်ပြု/ အတည်ပြုပေးခဲ့မှုမှာ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း ၁၅ ခု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏဒေါ်လာ ၉၇ ဒသမ ၁၃၆ သန်း ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးမြှင့်ခြင်းအပါအ၀င် စုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏ ဒေါ်လာ ၁၄၈ ဒသမ ၀၅၆ သန်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Posted in BusinessTagged စီးပွားရေး, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုLeaveaComment on ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည့် အမေရိကန်နှင့် တရုတ်တို့၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်မှု၊ အကျိုးစီးပွားကာကွယ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် မူဝါဒများကြောင့် မြန်မာအပါအ၀င် အာဆီယံနိုင်ငံများသို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီးဝင်မှု တုံ့ဆိုင်းလျက်ရှိ
အာဆီယံနိုင်ငံများ ထုတ်လုပ်မှု PMI ညွှန်းကိန်းတွင် နှစ်လဆက်တိုက် ထိပ်ဆုံး၌ ရပ်တည်ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေးအရှိန် ပျော့လာခြင်းကြောင့် မေလညွှန်းကိန်းတွင် အဆင့်လေးနေရာအထိ ကျဆင်း
ရန်ကုန်မြို့ရှိ စားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်သော စက်ရုံတစ်ရုံကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-ပြည့်ဖြိုးအောင်)
၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်၊ ဧပြီ အာဆီယံနိုင်ငံများ ထုတ်လုပ်မှု PMI (Manufacturing Purchasing Manager’s Index – ၀ယ်ယူရေး မန်နေဂျာများ၏ အညွှန်းကိန်း) ညွှန်းကိန်းတွင် နှစ်လဆက်တိုက် ထိပ်ဆုံး၌ ရပ်တည်ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံသည် စီးပွားရေးအရှိန် ပျော့လာခြင်းကြောင့် မေလညွှန်းကိန်းတွင် အဆင့်လေးနေရာအထိ ကျဆင်းခဲ့ကြောင်း Nikkei ၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ပြုလုပ်သော IHS Markit စစ်တမ်းတွင် ဖော်ပြချက်အရ သိရသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလ အာဆီယံထုတ်လုပ်မှု PMI ညွှန်းကိန်းတွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံက ၅၃ ဒသမ ၉၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက ၅၃ ဒသမ ၇၊ စင်ကာပူနိုင်ငံက ၅၂ ဒသမ ၈၊ မြန်မာနိုင်ငံက ၅၂ ဒသမ ၆၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက ၅၁ ဒသမ ၇၊ ထိုင်းနိုင်ငံက ၅၁ ဒသမ ၁၊ မလေးရှားနိုင်ငံ က ၄၇ ဒသမ ၆ ရရှိခဲ့ပြီး စစ်တမ်းကောက်ယူသည့် အာဆီယံနိုင်ငံ ခုနစ်နိုင်ငံတွင် မြန်မာနိုင်ငံက အဆင့်လေးသာ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထုတ်လုပ်ရေး PMI အလိုက် နိုင်ငံများ၏ ထိပ်သီးအဆင့်ကို ဗီယက်နမ်က ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍ မေလတွင် အရှိန်ပိုရလာခဲ့ခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံထံမှ ရယူလိုက်သည်။ ဖိလစ်ပိုင်သည် လုပ်ကိုင်မှု အခြေအနေများ လျင်မြန်စွာ တိုးတက်လာနေကြောင်း မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့လျက် ကပ်ပြီးလိုက်နိုင်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးသည် အားကောင်းနေဆဲ ဖြစ်သော်လည်း ဧပြီနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် စီးပွားရေးအရှိန် ပျော့လာခဲ့သောကြောင့် အဆင့်သတ်မှတ်မှုတွင် စတုတ္ထနေရာသို့ ဆင်းပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ၀ယ်ယူရေး မန်နေဂျာများ၏ အညွှန်းကိန်းသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လတွင် ၅၃ ဒသမ ၁ အထိရှိခဲ့ရာမှ ဧပြီ လတွင် ၅၂ ဒသမ ၉၊ မေလတွင် ၅၂ ဒသမ ၀၀ ရှိခဲ့ကာ ဇွန်လတွင် ၄၉ ဒသမ ၄၊ ဇူလိုင် လတွင် ၄၉ ဒသမ ၁ အထိ ဆက်တိုက်ပြန်လည် ကျဆင်းခဲ့သည်။ ထို့နောက် သြဂုတ်လတွင် ၄၉ ဒသမ ၃၊ စက်တင်ဘာလတွင် ၄၉ ဒသမ ၄၊ အောက်တိုဘာလတွင် ၅၁ ဒသမ ၁ အထိ၊ နိုဝင်ဘာလတွင် ၅၁ ဒသမ ၆ အထိ ပြန်လည် မြင့်တက်ခဲ့သော်လည်း ဒီဇင်ဘာလတွင် ၅၁ ဒသမ ၁ အထိ ကျဆင်းခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလတွင် ၅၁ ဒသမ ၇၊ ဖေဖော်ဝါရီ လတွင် ၅၂ ဒသမ ၆ အထိ၊ မတ်လတွင် ၅၃ ဒသမ ၇၊ ဧပြီလတွင် ၅၅ ဒသမ ၅ (၂၀၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာတွင် စတင်ခဲ့သည့် စစ်တမ်းကာလအတွင်း အမြင့်ဆုံး) အထိ မြင့်တက်ခဲ့ကာ မေလတွင် ၅၂ ဒသမ ၆ အထိ လျှောဆင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မေလစစ်တမ်းဒေတာသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍ တစ်ဝန်း၌ တိုးတက်မှုအရှိန် ကျဆင်းလာမှုကို အချက်ပြနေပြီး သုံးလတာအတွက် အားအပျော့ဆုံး ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် အော်ဒါသစ်များ ဦးမော့လာမှုမှာ ခြုံပြောရလျှင် တိုးတက်မှုနှုန်း အမြင့်ပိုင်းတွင် ရှိသော်လည်း အားပျော့လာခဲ့သည်။ လက်ကျန် အလုပ်များမှာ သိသာသည့်အရှိန်ဖြင့် ကျဆင်းလာခဲ့ပြီး အလုပ်နေရာ တိုးတက်ခန့်ထားမှုမှာ လွန်ခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာမှစပြီး အနှေးဆုံးသို့ အားပျော့သွားခဲ့သည်။ ယင်းအတောအတွင်း ထည့်သွင်းကုန်ဈေးနှုန်း ဖောင်းပွမှုသည် အရှိန်ရလာပြီး ကုန်ကျစရိတ်များမှာ လေးလအတွင်း အမြန်ဆုံးနှုန်းဖြင့် မြင့်တက်ခဲ့သည်။
ထို့အတူ ထုတ်လုပ်ရေး တိုးတက်မှု မသိမသာ နှေးလာခဲ့သည်နှင့်အမျှ အလုပ်နေရာ တိုးခန့်မှုလည်း အနည်းငယ် အားပျော့ခဲ့ရာ အလုပ်နေရာသစ် ဖန်တီးနှုန်းသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာမှစပြီး အနှေးဆုံး ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထုတ်လုပ်ရေး စွမ်းအားများအပေါ် ဖိအားပေးမှု နည်းလာခြင်း၏ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုကို လက်ကျန်အလုပ်များ သိသာစွာ ကျဆင်းလာမှုတွင်ပါ တွေ့မြင်နိုင်ခဲ့သည်။ လုပ်ငန်းများတွင် အကောင်းမြင်စိတ် မသိမသာ မြင့်တက်ခဲ့သော်လည်း လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ယုံကြည်မှုမှာ အားနည်းလျက်ရှိသည်။
Posted in BusinessTagged PMI, စီးပွားရေးLeaveaComment on အာဆီယံနိုင်ငံများ ထုတ်လုပ်မှု PMI ညွှန်းကိန်းတွင် နှစ်လဆက်တိုက် ထိပ်ဆုံး၌ ရပ်တည်ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေးအရှိန် ပျော့လာခြင်းကြောင့် မေလညွှန်းကိန်းတွင် အဆင့်လေးနေရာအထိ ကျဆင်း
စီးပွားက ကျပ်၊ လုပ်ရကိုင်ရ ခက်၊ ကုန်ဈေးနှုန်းက တက်
Posted on May 27, 2018 May 28, 2018 by Eleven Media Group
ရန်ကုန်မြို့ သံဈေးတွင် ဈေးရောင်းချနေသူ တစ်ဦးအား တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-ကျော်ဇင်ဖြိုး)
စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် အများစုက မြန်မာ့စီးပွားရေး အနာဂတ်အတွက် မှန်းဆရခက်ပြီး ထိလွယ်ရှလွယ် ဖြစ်နေသည်ဟု ဆိုကြသည်။
စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အလားအလာကောင်းများ ရှိနေသည်ဟု ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ထုတ်ပြန်သည့် မြန်မာ့စီးပွားရေး စောင့်ကြည့် အစီရင်ခံစာတွင် ခန့်မှန်းခဲ့ကြသော်လည်း ပြည်သူများ ခံစားရမှု မရှိသလောက် နည်းပါးနေသည်။
ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ရုန်းကန်နေရသည်။ ပြည်သူအများစု စီးပွားရေး အကျပ်အတည်းအောက် ရောက်နေသည်။ စက်သုံးဆီဈေးနှုန်း မြင့်တက်ခြင်း၊ နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်း မြင့်တက်လာခြင်း၊ ၀န်ထမ်းလစာ တိုးမြှင့်ခြင်း၊ အခွန်တိုးမြှင့် ကောက်ခံခြင်း၊ ကုန်ဈေးနှုန်း မြင့်တက်လာခြင်း စသည်တို့က ပြည်သူများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များအပေါ် ထိုးနှက်ချက်များ ဖြစ်လာပြန်သည်။
နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် စက်သုံးဆီများကို အရည်အသွေးနှင့် ဈေးနှုန်းမှန်ကန်စွာဖြင့် သုံးစွဲနိုင်ရေး အထူးအရေးကြီးပြီး နိုင်ငံတကာ ဈေးနှုန်းအပေါ် အခြေခံ၍ ပြည်တွင်းဈေးနှုန်းများ ပြောင်းလဲမည် ဖြစ်သော်လည်း ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်သည့် ပြောင်းလဲမှုမျိုး ဖြစ်စေရန် လိုအပ်နေကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်က ဆိုသည်။
ကမ္ဘာ့ရေနံစိမ်းနှင့်အတူ နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်း မြင့်တက်ခဲ့သဖြင့် ပြည်တွင်း စက်သုံးဆီဈေးနှုန်း ဧပြီလကုန်ပိုင်းမှ စတင်မြင့်တက်လာခဲ့ရာမှ မေလတတိယပတ်အထိ တစ်လအတွင်း တစ်လီတာလျှင် ကျပ် ၁၀၀ ၀န်းကျင်အထိ မြင့်တက်ခဲ့သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ဒုတိယပတ်မှစတင်၍ ကမ္ဘာ့ရေနံဈေးနှုန်း သိသိသာသာ စတင်မြင့်တက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လဆန်းပိုင်းက ၄၉ ဒေါ်လာဝန်းကျင်ရှိသော ကမ္ဘာ့ရေနံဈေးနှုန်းသည် အောက်တိုဘာ လဆန်းပိုင်းတွင် ၅၁ ဒေါ်လာ၊ နိုဝင်ဘာလဆန်းတွင် ၅၅ ဒေါ်လာ၊ ဒီဇင်ဘာလဆန်းတွင် ၅၈ ဒေါ်လာ၊ ဇန်န၀ါရီလဆန်းတွင် ၆၁ ဒေါ်လာ၊ ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းတွင် ၆၄ ဒေါ်လာ၊ ဧပြီလကုန်ပိုင်းတွင် ၆၈ ဒေါ်လာ၊ မေ ၁၀ ရက်တွင် ၇၁ ဒေါ်လာအထိ ဆက်လက် မြင့်တက်ခဲ့ကာ ဧပြီလဆန်းပိုင်း ဈေးနှုန်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၁၂ ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင် မြင့်တက်ခဲ့သည်။
ပြည်တွင်းဈေးကွက်အတွင်း ရောင်းချလျက်ရှိသော စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းသည် ကမ္ဘာ့စက်သုံးဆီဈေးနှုန်း၊ နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စရိတ်အပေါ် အခြေခံပြီး ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ပြည်တွင်းဈေးကွက်တွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ် မေ ၁၈ ရက်တွင် ဖြစ်ပေါ်သော စက်သုံးဆီ လက်လီဈေးများမှာ ဒီဇယ်တစ်လီတာ ကျပ် ၈၈၀ (တစ်ဂါ လန် ၃၉၉၅ ကျပ်) ပရီမီယံဒီဇယ် တစ်လီတာ ကျပ် ၈၉၅ (တစ်ဂါလန် ၄၀၆၃ ကျပ်)၊ အောက်တိန်း 92 Ron တစ်လီတာ ကျပ် ၈၄၅ (တစ်ဂါလန် ၃၈၃၆ ကျပ်) အောက်တိန်း 95 Ron တစ်လီတာ ၈၉၅ ကျပ် (တစ်ဂါလန် ၄၀၆၃ ကျပ်) ဖြစ်သည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီ ၃၀ ရက်တွင် ဖြစ်ပေါ်သည့် ဈေးနှုန်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဒီဇယ်တစ်လီတာ ၃၅ ကျပ် (၄ ဒသမ ၁၄ ရာခိုင်နှုန်း)၊ ပရီမီယံဒီဇယ် တစ်လီတာ ၃၅ ကျပ် (၄ ဒသမ ၀၆ ရာခိုင်နှုန်း)၊ အောက်တိန်း 92 Ron တစ်လီတာ ၃၅ ကျပ် (၄ ဒသမ ၃၂ ရာခိုင်နှုန်း)၊ အောက်တိန်း 95 Ron တစ်လီတာ ၄၀ ကျပ် (၄ ဒသမ ၆၇ ရာခိုင်နှုန်း) ၁၈ ရက်အတွင်း မြင့်တက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ပြည်တွင်းဈေးကွက်တွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ ၁ ရက်တွင် ဖြစ်ပေါ်သော စက်သုံးဆီ လက်လီဈေးများမှာ ဒီဇယ်တစ်လီတာ ကျပ် ၈၀၀ (တစ်ဂါ လန် ၃၆၃၂ ကျပ်) ပရီမီယံဒီဇယ် တစ်လီတာ ကျပ် ၈၂၀ (တစ်ဂါလန် ၃၇၂၂ ကျပ်)၊ အောက်တိန်း 92 Ron တစ်လီတာ ကျပ် ၈၀၀ (တစ်ဂါလန် ၃၆၃၂ ကျပ်) အောက်တိန်း 95 Ron တစ်လီတာ ၈၄၅ ကျပ် (တစ်ဂါလန် ၃၈၃၆ ကျပ်) ဖြစ်ရာ ငါးလကျော်အတွင်း ဒီဇယ် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ပရီမီယံဒီဇယ် ၉ ဒသမ ၁၄ ရာခိုင်နှုန်း၊ 92 Ron ၅ ဒသမ ၆၂ ရာခိုင်နှုန်း၊ 95 Ron ၅ ဒသမ ၉၁ ရာခိုင်နှုန်း ဈေးနှုန်းမြင့်တက်ခဲ့သည်။
မေ ၂၆ ရက်တွင် ဖြစ်ပေါ်သော စက်သုံးဆီ လက်လီဈေးများမှာ 92 Ron အမြင့်ဆုံးဈေး ၈၇၀ ကျပ်၊ 95 Ron အမြင့်ဆုံးဈေး ၉၂၀ ကျပ်၊ ပရီမီယံဒီဇယ် ၉၂၀ ကျပ်၊ ဒီဇယ်ဈေး ၉၀၅ ကျပ်အထိ ပေါက်ဈေးရှိကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ စက်သုံးဆီ တင်သွင်းရောင်းချ ဖြန့်ဖြူးရေးအသင်းမှ ထုတ်ပြန်ထားသည်။
“ကျွန်တော်တို့က အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ခရီးခဏခဏ ထွက်ရပါတယ်။ တစ်လီတာကို ၈၀၀ ကျပ်ဝန်းကျင် တုန်းက ခရီးတွေ ဆက်တိုက်သွားတယ်။ ၉၀၀ ကျပ်အထိ သွားနိုင်သေးတယ်။ အဲဒီထက် ကျော်သွားရင် ခရီးမသွားနိုင်တော့ဘူး။ နယ်တွေမှာ ဆီဈေးပိုတက်တယ်။ အခု ဒီဈေးနဲ့တင် မြို့ထဲ ဟိုနားဒီနားသွားတာ ကိုယ့်ကားနဲ့ကိုယ် သိပ်မသွားနိုင်တော့ဘူး။ လိုင်းကားနဲ့ပဲ သွားရတော့မလို ဖြစ်နေတယ်။ ဆီဈေးဒီထက် တက်လာရင်တော့ ကားထိုးထားရတော့မယ်” ဟု ရန်ကုန်မြို့ခံတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
“စက်သုံးဆီ ဈေးတက်တော့ ကျွန်တော်တို့ ကားသမားတွေ အရင်ခံရတယ်။ ကိုယ်ပိုင်နဲ့ Taxi မောင်းနေတဲ့သူတွေက သိပ်အထိမနာပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့လို အငှားမောင်းနေရတဲ့သူတွေမှာ နေ့တွက်တောင် မကိုက်တော့ဘူး။ ကားဆွဲမကောင်းတာကြာပြီ။ Taxi ဈေးကွက် မကောင်းတာ ကြာပြီ။ ဒီကြားထဲ ဆီဈေးတက်တော့ ပိုဆိုးပေါ့ဗျာ” ဟု ရန်ကုန်မြို့ရှိ Taxi ယာဉ်မောင်းတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံက တစ်နှစ်လျှင် ဓာတ်ဆီ တန်ချိန်နှစ်သိန်း၊ ဒီဇယ် တန်ချိန်လေးသိန်းခန့် တင်သွင်းလျက်ရှိသည်။ ဓာတ်ဆီကို မော်တော်ကားနှင့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊ မီးစက်များ စသည်တို့တွင် အသုံးပြုသည်။ ဒီဇယ်ကိုမူ မော်တော်ကားများ၊ အိမ်စီးကားများ၊ ကုန်တင်ကားများ၊ သင်္ဘောများ၊ ကုန်တင်သင်္ဘောများ၊ ငါးဖမ်းသင်္ဘော၊ သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်း၊ ကျောက်မျက် တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်း၊ ရွှေတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းများ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများ စသည်တို့တွင် အသုံးပြုသည်။
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ပြည်တွင်းသို့ စက်သုံးဆီ တင်သွင်းမှုတန်ဖိုး ဒေါ်လာသုံးဘီလျံအထိ စံချိန်တင် တင်သွင်းထားပြီး ယခင်နှစ် ကာလတူထက် ဒေါ်လာတစ်ဘီလျံကျော် ပိုများနေကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။
စက်သုံးဆီဈေးတွေ မြင့်တက်မှု ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲ
ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်တွင် ရေနံစိမ်း ဈေးတက်လာချိန် ပြည်တွင်း၌ စက်သုံးဆီဈေး မြင့်တက်သည်။ ကမ္ဘာ့ဈေး ကျဆင်းချိန်၌မူ ပြည်တွင်းဈေးကွက်တွင် စက်သုံးဆီဈေး ကျဆင်းလေ့ မရှိခြင်းမှာလည်း မေးခွန်းထုတ်စရာ ရှိလာခဲ့သည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် စက်သုံးဆီ အရောင်းဆိုင်များမှ နိုင်ငံတကာ ဈေးနှုန်းထက် လေးရာခိုင်နှုန်းကျော် အရှုံးခံ ရောင်းချနေသော်လည်း ယင်းအရှုံးခံ ရောင်းချမှုသည် စာရွက်ပေါ်၌သာ အရှုံးပေါ်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း မေ ၂၂ ရက်က မြန်မာနိုင်ငံ စက်သုံးဆီတင်သွင်း ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူများ အသင်း၌ ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် အဆိုပါ အသင်း၏ အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာဝင်းမြင့်က ပြောကြားခဲ့သည်။
“ဈေးက နိုင်ငံခြားက တက်သွားတာက တစ်လီတာကို ၁၁၈ ကျပ်တက်သွားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပြည်တွင်းမှာ တက်တာက ၁၀၈ ကျပ်ပဲတက်ဖြစ်တယ်။ ၁၀ လောက် တောင် ကျွန်တော်တို့ ဈေးနှုန်းတက်တာ လျော့တယ်။ အရှုံးအမြတ် ရာခိုင်နှုန်း အနေနဲ့ကတော့ ဧပြီလတုန်းက ၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းပဲ ရှုံးတယ်။ ခု ၄ ဒသမ ၂၃ ရာခိုင်နှုန်း စာရွက်ပေါ် မှာ အရှုံးပေါ်ပါတယ်” ဟု ဒေါက်တာဝင်းမြင့်က ပြောကြားသည်။
ယင်းကဲ့သို့ အရှုံးခံ ရောင်းနိုင်ခြင်းသည် ယခင်က စက်သုံးဆီဈေး နှုန်းအနိမ့်ဖြင့် ရထားသည့် ဆီများကို လက်ရှိရောက်ရှိနေသည့် ဈေးနှုန်းအတိုင်း ဈေးနှုန်းတက်ရောင်းချခြင်း မဟုတ်ဘဲ လေးရာခိုင်နှုန်းကျော် လျော့ရောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း နိုင်ငံတကာ စက်သုံးဆီဈေး မြင့်တက်လာသည့် ကာလတွင် စက်သုံးဆီ ရောင်းချသည့် ဆိုင်များအနေဖြင့် ရှုံးနိုင်ကြောင်း ၎င်းက ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
“ကမ္ဘာ့ဈေး ဘယ်လောက်ရှိတယ်၊ မြန်မာ့ဈေး ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတယ်။ ဒေါ်လာဈေး ဘယ်လောက်ရှိတယ် ဆိုတာ တစ်ချက်ကြည့်ရင် သိတာပဲဗျာ။ ကမ္ဘာ့ဈေးတက်လို့ မြန်မာ့ဈေး လိုက်တက်တာတော့ မပြောလိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာ့ဈေးကျပြီး မြန်မာ့ဈေး မကျတာကတော့ မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာ၊ အခုဟာက လိမ်လို့ညာလို့ မရဘူးလေ။ အင်တာနက်ထဲမှာ သိချင်တာကို ခေါက်လိုက်ရင် သိနေတာပဲဟာ။ ဒီအပေါ်မှာ အာဏာရှိတဲ့ သူတွေက ထိန်းညှိပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ထိန်းညှိပေးပါ” ဟု စက်မှုဇုန် လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကဏ္ဍတွင် မရှိမဖြစ် အရေးပါသည့် ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီ စသည့် စက်သုံးဆီဆိုင်များမှာ နိုင်ငံတကာနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်ခြင်း ကြုံတွေ့နေရပြီး လက်ရှိတွင် နိုင်ငံ့အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြုံလာရပါက တည်ငြိမ်မှု ထိန်းထားနိုင်ရန်၊ စက်သုံးဆီ သိုလှောင်ခွင့် ရထားသူများ၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက် ရောက်ရှိနေသည့် အခြေအနေများကို ပြင်ဆင်နိုင်ရန် လာမည့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်မှစ၍ အစိုးရက မမြင်နိုင်သောလက်ဖြင့် ထိန်းကျောင်းသွားမည့်အပြင် စက်သုံးဆီဈေးနှုန်း လျှော့ချနိုင်ရေးအတွက် ကုမ္ပဏီထူထောင်ရန် ကြိုးစားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက မတ် ၇ ရက်တွင် ပြောကြားသည်။
“ဒီဇယ်၊ ဓာတ်ဆီစက်သုံးဆီတွေဟာ ကုန်စည်စီးဆင်းမှုအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံတကာနဲ့ယှဉ်ရင် ဈေးအင်မတန်ကြီးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီက နိုင်ငံတကာထက် နည်းနည်းပိုပြီး ဈေးများနေတဲ့ အခြေအနေမျိုး ရှိပါတယ်။ ဒါကို စင်ကာပူကနေ တင်သွင်းရတာပဲဆိုပြီး စင်ကာပူ ပမာဏနဲ့ သင်္ချာနည်းနဲ့ တွက်မယ်ဆိုရင် ဒီအဖြေဟာ မှန်ကောင်း မှန်ပါလိမ့်မယ်။ စီးပွားရေးအရ တွက်မယ် ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ စက်သုံးဆီကို သန်းနဲ့ချီပြီး သိုလှောင်ထားမယ်ဆိုရင် စက်သုံးဆီဈေးကို ထိန်းနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုအခြေအနေမှာတော့ စက်သုံးဆီကို သိုလှောင်ခွင့်ရှိတဲ့ သူတွေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာပဲ တချို့အခြေအနေတွေက ရောက်နေတာ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီအခြေအနေကို ၂၀၁၈-၂၀၁၉ မှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက် အစိုးရကိုယ်တိုင်က မမြင်ရတဲ့လက်နဲ့ ထိန်းဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်” ဟု ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက မတ် ၇ ရက်က ပြောကြားသည်။
“ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီအနေနဲ့လည်း ထူထောင်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆို ကျွန်တော်တို့ ထိန်းပါမယ်။ စက်သုံးဆီ သိုလှောင်မှုဟာ ကျွန်တော်တို့ ခြောက်လစာလောက် ထိန်းထားနိုင်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဈေးကို လျှော့ချလို့ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆို ဈေးက နေ့စဉ်ပေါက်နေတဲ့ ဈေးနဲ့တွက်ပြီး ရောင်းရတဲ့ လုပ်ငန်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီဥစ္စာက ဈေးကိုအနိမ့်ဆုံးအချိန်မှာ တစ်နှစ်စာဖြတ်ပြီး ၀ယ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ရန်ကုန်ကို ပို့ထားလို့လည်း ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့မှာ ဒီပစ္စည်းတွေကို သိုလှောင်နိုင်တဲ့ အဆင့်ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အရေးပေါ် အခြေအနေ တစ်ခုခုမှာ စက်သုံးဆီကို ကာလကြာရှည် ထိန်းထားနိုင်မှသာလျှင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကို ပိုပြီးထိန်းညှိ ပေးထားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ အခြေအနေများကြောင့် စက်သုံးဆီများ ဈေးနှုန်းကျဆင်း လာနိုင်ရေးနှင့် ကုန်စည်သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍတွင် ဈေးအများဆုံး ဖြစ်နေသည့် နိုင်ငံအဖြစ်မှ ဆင်းသက်နိုင်ရန် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရက စီစဉ်နေကြောင်းနှင့် ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကိုပါ အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ရန် ကြိုးစားရမည်ဖြစ်ပြီး ကုန်းလမ်းတစ်ခုသာ အားပြုနေမည် ဆိုပါက ကုန်စည်သယ်ယူ ပို့ဆောင်မှုဈေးနှုန်း ကြီးမြင့်နေမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် စက်သုံးဆီဆိုင်များ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်မှ လက်သင့်မခံမှုကြောင့် ချိန်ညှိနေရသည့်အတွက် ကြန့်ကြာနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက မတ် ၇ ရက်က ပြောကြားခဲ့သည်။
စက်သုံးဆီဈေးနှင့်အတူ နိုင်ငံခြား ငွေလဲနှုန်း မြင့်တက်လျက်ရှိသ ဖြင့် ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် အဆင်ပြေသော်လည်း သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များ အတွက်မူ ပို၍ အခက်အခဲများ ရှိလာသည်ဟု ဆိုကြသည်။
ရန်ကုန်မြို့ မြို့နယ်တစ်ခု အတွင်းရှိ ဈေးတွင် ရောင်းချနေသူများအား တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-ကြည်နိုင်)
ကမ္ဘာ့ဒေါ်လာဈေး အညွှန်းကိန်းသည် မေ ၂၅ ရက်တွင် ၉၄ ပွိုင့်အထက်ရောက်ပြီး တစ်ပတ်တာ ဈေးပိတ်ခဲ့ကာ မေ ၂၆ ရက် ပြည်တွင်းဈေးကွက်၌ နိုင်ငံခြား ငွေလဲနှုန်း တစ်ဒေါ်လာ ၁၃၄၈ ကျပ် ၀န်းကျင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံခြားငွေကြေး ရောင်းဝယ်သူများထံမှ သိရသည်။
ကမ္ဘာ့ဒေါ်လာဈေး အညွှန်းကိန်းသည် သုံးနှစ်ကျော်အတွင်း အ နိမ့်ဆုံးနှုန်းထားအဖြစ် ဇန်န၀ါရီ ၂၅ ရက်တွင် ၈၈ ဒသမ ၆၃ ပွိုင့်အထိ ကျဆင်းခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သော ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်အထိ ၉၄ ပွိုင့်အထက်သို့ ရောက်ခဲ့သော်လည်း ဒီဇင်ဘာ ၁၈ နှင့် ၂၀ ရက်တွင် ၉၃ ပွိုင့်အောက်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကာ ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်တွင် ၉၂ ပွိုင့်အောက် စဆင်းခဲ့သည်။ ဇန်န၀ါရီ ၁၁ ရက်တွင် ၉၁ ပွိုင့်အောက်၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၃ ရက်တွင် ပွိုင့် ၉၀ အောက်၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၅ နှင့် ၃၁ ရက်တွင် ၈၉ ပွိုင့်အောက်သို့ ရောက်ခဲ့ပြီး ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက်တွင် ၈၉ ပွိုင့် အထက်၊ မတ် ၁၇ ရက်အထိ ပွိုင့် ၉၀ အထက် ရှိသော်လည်း မတ် ၁၉ ရက်တွင် ပွိုင့် ၉၀ အောက်၊ မတ် ၂၆ ရက်တွင် ၈၉ ပွိုင့်အောက်သို့ ကျ ဆင်းကာ ဧပြီ ၅ ၊ ၂၁ တွင် ပွိုင့် ၉၀ အထက်၊ ဧပြီ ၂၆ ရက်တွင် ၉၁ ပွိုင့် အထက် မေ ၁ ရက်တွင် ၉၂ ပွိုင့်အထက်၊ မေ ၁၅ ရက်တွင် ၉၃ ပွိုင့်အထက်၊ မေ ၂၅ ရက်တွင် ၉၄ ပွိုင့်အထက် ပြန်ရောက်ခဲ့သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ၂၀၁၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလနောက်ပိုင်း ဇန်န၀ါရီ ၃ ရက် တွင် ၁၀၃ ဒသမ ၈၂ ပွိုင့်အထိအမြင့်ဆုံး ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလက စတင်ကာ ဒေါ်လာဈေး အညွှန်းကိန်းများ ပြန်ကျခြင်းဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့် ငါးလအတွင်း အမြင့်ဆုံး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ညွှန်းကိန်းများမှာ ဒီဇင်ဘာတွင် ၉၄ ဒသမ ၁၈ ပွိုင့်၊ ဇန်န၀ါရီတွင် ၉၂ ဒသမ ၃၆ ပွိုင့်၊ ဖေဖော်ဝါရီတွင် ၉၀ ဒသမ ၄၃ ပွိုင့်၊ မတ်တွင် ၉၀ ဒသမ ၃၇ ပွိုင့်၊ ဧပြီတွင် ၉၁ ဒသမ ၇၁ ပွိုင့်ဖြစ်သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လလယ်မှ စတင်ကာ ကမ္ဘာ့ဒေါ်လာဈေး အညွှန်းကိန်း သိသိသာသာ ကျဆင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းဈေးကွက်၌ ငါးလအတွင်း လအလိုက် ဖြစ်ပေါ်သော နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်း အနိမ့်ဆုံးနှင့် အမြင့်ဆုံးနှုန်းများမှာ ဒီဇင်ဘာတွင် ၁၃၅၄-၁၃၅၉ ကျပ်၊ ဇန်န၀ါရီ တွင် ၁၃၂၃-၁၃၅၄ ကျပ်၊ ဖေဖော်ဝါရီတွင် ၁၃၂၃-၁၃၃၁ ကျပ်၊ မတ်တွင် ၁၃၂၆-၁၃၃၄ ကျပ်၊ ဧပြီတွင် ၁၃၂၄-၁၃၃၂ ကျပ်တို့ဖြစ်ပြီး ဇန်န၀ါရီတွင် ကွာဟချက် အများဆုံး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့် မတ်လအတွင်း အမြင့်ဆုံး ဈေးနှုန်းအဖြစ် မတ် ၂၁ ရက် တွင် ၁၃၃၄ ကျပ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ဒေါ်လာဈေးသည် မတ် ၂၉ ရက် တွင် ၁၃၂၈ ကျပ်အထိ၊ ဧပြီလဆန်း တွင် ၁၃၂၄ ၀န်းကျင်အထိ ကျဆင်းခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဧပြီလကုန်ပိုင်း ၂၈ ရက်တွင် ၁၃၃၁ ကျပ်၊ မေ ၂၁ ရက်တွင် ၁၃၅၁ ကျပ်အထိ မြင့်တက်ခဲ့ပြီး မေ ၂၆ ရက်တွင် ၁၃၄၈ ကျပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ မေ ၂၅ ရက်တွင် သတ်မှတ်ထားသော ဗဟိုဘဏ် ရည်ညွှန်းငွေလဲနှုန်းမှာ ၁၃၅၆ ကျပ်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
NLD အစိုးရသစ် တက်လာပြီးနောက် နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်း အခြေအနေကို လေ့လာကြည့်ပါက ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဧပြီမှ သြဂုတ်လလယ်အထိ နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်း အတက်အကျ နည်းပါးသော်လည်း သြဂုတ်လကုန်မှစပြီး မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုး သိသိသာသာ ကျဆင်းလာခြင်းဖြစ်ကာ စက်တင်ဘာ၊ အောက်တိုဘာလနှင့် နိုဝင်ဘာလဆန်းအထိ အတက်ဘက်သို့ ဆက်တိုက် ဦးတည်လာခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် စံချိန်တင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် အမြင့်ဆုံး ငွေလဲနှုန်းမှာ ၁၃၆၅ ကျပ် (၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၁ ရက်) ဖြစ်ပြီး အနိမ့်ဆုံး နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းမှာ ၇၂၅ ကျပ် (၂၀၁၁ ခုနှစ် သြဂုတ် ၁၇ ရက်) ဖြစ်သည်။
မြန်မာ့စီးပွားရေး စောင့်ကြည့် အစီရင်ခံစာအရ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းသည် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ခုနစ် ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ရာမှ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ၅ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းသို့ ကျဆင်းခဲ့ပြီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ၄ ဒသမ ၉ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ကျဆင်းသွားမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်၏ ပထမနှစ်ဝက်တွင် ဈေးနှုန်းများသည် အသင့်အတင့်သာ မြင့်တက်ခဲ့သော်လည်း ဒုတိယနှစ်ဝက် ကာလတွင် ပိုမိုလျင်မြန်စွာ မြင့်တက်ခဲ့သည်။ အစားအသောက်နှင့် လောင်စာဆီဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်ရခြင်းမှာ အထူးသဖြင့် ကမ္ဘာ့လောင်စာဆီ ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်ခဲ့၍ဖြစ်သည်။
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် တစ်လျှောက်တွင် နိုင်ငံခြားသုံးငွေနှင့် ယှဉ်လျှင် ပြည်တွင်းကျပ်ငွေတန်ဖိုး မြင့်တက်ခဲ့သော်လည်း ကျပ်ငွေ၏ ပကတိတန်ဖိုးမှာ ကျဆင်းခဲ့သည်။ ထိုင်း၊ မလေးရှားနှင့် တရုတ်နိုင်ငံကဲ့သို့ အဓိက ကုန်သွယ်ဖက် နိုင်ငံများနှင့်ယှဉ်လျှင် ငွေကြေးလဲလှယ်နှုန်းများ ကျဆင်းခဲ့ပြီး ငွေဖောင်းပွမှုနှုန်း မြန်ဆန်ခဲ့ရာ လက်လီကုန်သည်များနှင့် သွင်းကုန်သုံးစွဲသူများအပေါ် ထိခိုက်မှု ရှိခဲ့သည်ဟု ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ဆိုသည်။
“ပို့ကုန်သမားတွေအတွက် ကောင်းပေမဲ့ သွင်းကုန်တွေ ဈေးကြီးတဲ့အတွက် အခက်အခဲ ဖြစ်ပေမဲ့ ဒါတွေက နောက်ဆုံးမှာတော့ စားသုံးသူတွေတွေဆီပဲ ရောက်ပါတယ်” ဟု သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
“ဒီနှစ်ပိုင်းတွေမှာ လုပ်ငန်းတွေက မကောင်းကြဘူး၊ ၀န်ထမ်းစရိတ်၊ ရုံးစရိတ်၊ စက်ရုံစရိတ်ကျေရုံ အလုပ်လုပ်နေကြရတာ၊ ဆီဈေးတက်တော့ ၀င်ငွေပိုမရဘဲ စရိတ်ပိုထောင်းတာပေါ့” ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါး အသင်းချုပ်၊ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဦးနေလင်းဇင်က ပြောကြားသည်။
ယင်းကဲ့သို့ နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းများ မြင့်တက်လာခြင်းကြောင့် ပြည်ပမှ တင်သွင်းနေရသည့် နို့မှုန့်၊ တစ်သျှူး၊ ကော်ဖီ စသည့် ကုန်စည်အမည်အချို့ ယခင်ကထက် ကျပ် ၂၀၀ မှ ၅၀၀ အထိ မြင့်တက်လာကြောင်း ဈေးကွက်အတွင်းမှ သိရသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းများ ကြီးမြင့်နေမှုကြောင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်၊ သယ်ယူပို့ ဆောင်ရေး စရိတ်များ မြင့်တက်လာပြီး အထွေထွေ ကုန်ဈေးနှုန်းများ အပေါ်တွင်ပါ အကျိုးသက်ရောက်မှု ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်က ဆိုသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလဆန်းက သင်္ကြန် မတိုင်ခင်ကာလ ဖြစ်သည့်အတွက် အခြေခံစားသောက်ကုန် ဈေးနှုန်းများ စတင်မြင့်တက်လာရာ သင်္ကြန်ကျော်ကာလတွင် သမ္မတသစ် ဦးဝင်းမြင့် တက်လာပြီးနောက် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား လစာတိုးမြှင့်ပေးမည်ဆိုသည့် သတင်းများကြောင့် ကုန်ဈေးနှုန်း မြင့်တက်ခဲ့သည်။
စက်သုံးဆီဈေး မြင့်တက်လာခြင်း၊ ဒေါ်လာဈေး အခြေအနေများကြောင့်လည်း ပြည်တွင်း၌ ကုန်စည်အချို့ ဈေးနှုန်းလိုက်ပါ မြင့်တက်လာကြောင်း ဈေးကွက်အတွင်းမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
“စားဆီ၊ စက်သုံးဆီဈေးတွေ တက်လာပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ တက်လာပါတယ်။ အခြားကုန်ဈေးနှုန်း တွေကလည်း လစာတိုးအရှိန်နဲ့ တက်လာကြတယ်။ ကြက်သွန်၊ မီးဖိုချောင်သုံး သီးနှံဈေးတွေလည်း တက်နေတယ်” ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးအသင်းချုပ် တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဦးနေလင်းဇင်က ပြောကြားသည်။
အခြေခံစားသောက်ကုန် အများစုမှာ ကုန်ဈေးနှုန်း မြင့်တက်ပြီးနောက် ပြန်လည်ကျဆင်းလေ့ မရှိသဖြင့် လက်ရှိအချိန်တွင် အတက်ဈေးဘက်တွင်သာ ရှိနေခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့် လများအတွင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် ကုန်စည်ဈေးနှုန်းများကို လေ့လာကြည့်ပါက သင်္ကြန်ကာလ မတိုင်မီ ကုန်ဈေးနှုန်း ဈေးကွက်အတွင်း အခြေခံ စားသောက်ကုန်များ ဖြစ်သည့် ဆန်၊ ဆီနှင့် သားငါးဈေး မြင့်တက်ခဲ့သည်။
ဆန်ဈေးနှုန်း အနေဖြင့် ရွှေဘိုပေါ်ဆန်း တစ်ပြည်လျှင် ယခင်ကျပ် ၂၂၀၀-၂၅၀၀ မှ ကျပ် ၂၃၀၀-၂၉၀၀၊ ယခင်တစ်အိတ်လျှင် ၅၃၀၀၀ မှ ၆၉၀၀၀၊ ဖျာပုံဆန်သစ် ရှယ်တစ်ပြည်လျှင် ယခင်ကျပ် ၁၈၀၀-၂၀၀၀ မှ ကျပ် ၁၉၀၀-၂၂၀၀၊ တစ်အိတ်လျှင် ယခင်ကျပ် ၄၅၀၀၀ မှ ကျပ် ၅၀၀၀၀ သို့ အသီးသီး ဈေးတက်ခဲ့သည်။
ဆန်ကြမ်းဈေး အနေဖြင့် ဧည့်မထဆန် တစ်အိတ်လျှင် ယခင်ကျပ် ၂၄၀၀၀ မှကျပ် ၃၁၀၀၀၊ ဇီယာဆန် တစ်အိတ်လျှင် ယခင်ကျပ် ၂၄၀၀၀ မှ ကျပ် ၁၉၀၀၀ မှ ၃၀၀၀၀ ကျပ်သို့ ဈေးတက်ခဲ့သည်။
သား၊ ငါး ဈေးနှုန်းများ အနေဖြင့် မွေးမြူရေး ကြက်တစ်ပိဿာလျှင် ယခင်ကျပ် ၅၀၀၀-၆၀၀၀ ကြားရှိရာမှ ယခုကျပ် ၆၀၀၀-၇၀၀၀၊ ဗမာ ကြက်တစ်ပိဿာလျှင် ယခင်ကျပ် ၇၀၀၀-၈၀၀၀ ကြားမှ ၉၀၀၀- ၁၀၀၀၀၊ ၀က်သားတစ်ပိဿာလျှင် ယခင် ကျပ် ၆၀၀၀- ၁၀၀၀၀ ကြားမှ ကျပ် ၇၀၀၀မှ ၁၂၀၀၀၊ အမဲသား တစ်ပိဿာလျှင် ယခင် ကျပ် ၇၀၀၀ -၉၀၀၀ ကြားရှိခဲ့ရာမှ ကျပ် ၁၀၀၀၀ ကျော်အထိ ဈေးတက်ခဲ့သည်။
ကုန်ဈေးနှုန်းများ အနေဖြင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ ဈေးနှုန်းသိသိသာသာ မြင့်တက်လာခြင်းဖြစ်ပြီး လေးနှစ်တာ ကာလအတွင်း ကုန်ဈေးနှုန်းများ နှစ်ဆ၊ သုံးဆခန့် ဈေးနှုန်းမြင့်တက် ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကုန်ဈေးနှုန်း မြင့်တက်မှု အနေဖြင့် ၂၀၁၅ နိုဝင်ဘာလ ရွေးကောက်ပွဲပြီးကာလအတွင်းမှ စတင်ကာ သုံးနှစ်တာ ကာလအတွင်း အခြေခံ စားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းများ အနေဖြင့် စံချိန်တင်မြင့်တက် ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၁၅ နိုဝင်ဘာလမှ ထပ်မံ စတင်မြင့်တက်ခဲ့သည့် ကုန်ဈေးနှုန်းများသည် ၂၀၁၆ ဧပြီ သင်္ကြန်မတိုင်မီ ကာလတွင် ဈေးနှုန်းထပ်မံမြင့်ခဲ့သည်။
အခြေခံ စားသောက်ကုန်စည်များ အနေဖြင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ကုန်ဈေးနှုန်းများ ဈေးနှုန်းစတင် မြင့်တက်လာခြင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း ကုန်ဈေးနှုန်းများ အနေဖြင့် မြင့်တက်ခဲ့သော်လည်း စံချိန်တင် မြင့်တက်ခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ပေ။
သုံးနှစ်တာကာလ ကုန်စည်ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်ခြင်း အကြောင်းရင်းများ အနေဖြင့် ၀န်ထမ်းလစာတိုးခြင်း၊ ဒေါ်လာဈေး မြင့်တက်ခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်း အ၀င်နည်းခြင်းနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး စသည့် အခက်အခဲများကြောင့် ဈေးနှုန်းမြင့်တက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ပြည်သူများ အနေဖြင့် ကုန်ဈေးနှုန်း တစ်ဟုန်ထိုး မြင့်တက်သည့်ဒဏ်ကို ၂၀၁၃ ဇွန်လမှ စတင်၍ ခံစားလာရခြင်း ဖြစ်သည်။
သုံးနှစ်တာ ကာလအတွင်း မြင့်တက်ခဲ့သည့် အခြေခံ စားသောက်ကုန်စည်များ အနေဖြင့် တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ ဈေးနှုန်းသိသိသာသာ ပြန်လည်ကျဆင်းခြင်း မရှိသေးဘဲ ဈေးအနည်းငယ် အတက်အကျ ရှိရုံမျှသာ ရှိခဲ့သည်။
ထို့ပြင် အကောက်ခွန်နှုန်းများ ပြင်ဆင်သတ်မှတ် လိုက်ခြင်းကြောင့် ပြည်ပက တင်သွင်းသည့် အခြေခံ စားသောက်ကုန်အချို့ အကောက်ခွန် ပိုမိုပေးရမည် ဖြစ်သဖြင့် တင်သွင်းသူများက ဈေးတိုးရောင်းချမည် ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်မူ စားသုံးသူ ပြည်သူများသာ ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်သည့် ဒဏ်ကို ခါးစည်းခံရမည် ဖြစ်သည်ဟု မြန်မာ့စီးပွားရေး လေ့လာသူများက သုံးသပ်ကြသည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁ ရက်ကစတင်ပြီး ဘတ်စ်ကား၊ ထရပ်ကား၊ လူစီးမော်တော်ယာဉ်၊ သတင်းစာစက္ကူ၊ ဟန်းဆက်များ၊ ပြည်တွင်း၌ စိုက်ပျိုးထွက်ရှိသော အသီးအနှံများ စသည်တို့အပေါ် အခွန်နှုန်းထားများ တိုးမြှင့်ကောက်ခံရန် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ပြင်ဆင်တိုးမြှင့်လိုက်သည့် အကောက်ခွန်နှုန်းမှာ ဘိလပ်မြေကို တစ်ရာခိုင်နှုန်းကနေ သုံးရာခိုင်နှုန်း၊ အိမ်သုံးဆားကို ယခင် ၁၀ ရာခိုင် နှုန်းကနေ ရာခိုင်နှုန်း ၂၀၊ အသင့် သောက်သုံးနိုင်သည့် ကော်ဖီ (Instant Coffee) ကို ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းမှ ရာခိုင်နှုန်း ၂၀၊ ပြည်တွင်းတွင် စိုက်ပျိုးထွက်ရှိသည့် အသီးအနှံများကို ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းမှ ရာခိုင်နှုန်း ၃၀၊ ကြက်သွန်နီ/ကြက်သွန်ဖြူကို ယခင် ၀ ဒသမ ၅/၁ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ပန်းမျိုးစုံကို ယခင် ငါးရာခိုင်နှုန်းမှ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ပရိဘောဂများကို ယခင် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းမှ ရာခိုင်နှုန်း ၂၀ တိုးမြှင့် ကောက်ခံခြင်းဖြစ်သည်။
“လွယ်လွယ်ပြောရရင် အရင် ၁၀၀ တန် ကော်ဖီမစ်ဟာ ၁၂၀ ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ရာခိုင်နှုန်း တိုးမြှင့်မှုအလိုက် ကုန်ဈေးနှုန်းမြင့် တက်မယ့်ဒဏ်ကို ပြည်သူတွေ ခံရဦးမှာပါ” ဟု လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
အကောက်ခွန်နှုန်း ပြင်ဆင်မှုတွင် မော်တော်ယာဉ်များလည်း မလွတ်ခဲ့ပေ။ ဘတ်စ်ကားနှင့် ကုန်တင်ယာဉ်များကို ယခင် သုံးရာခိုင်နှုန်း ကောက်ခံနေရာမှ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း CKD စနစ်ဖြင့် တင်သွင်းထုတ်လုပ်မည့် ဘတ်စ်ကားနှင့် ကုန်တင်ယာဉ်များကို ယခင်သုံးရာခိုင်နှုန်း ကောက်ခံနေရာမှ ၇ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်း တိုးကောက်မည်ဖြစ်သည်။
အိမ်သုံးလူစီး မော်တော်ယာဉ်များကို ယခင်အတိုင်း မပြောင်းလဲဘဲ အင်ဂျင်ပါဝါ ၂၀၀၀ စီစီနှင့်အောက် မော်တော်ယာဉ်များကို ရာခိုင်နှုန်း ၃၀ အင်ဂျင်ပါဝါ ၂၀၀၀ စီစီအထက် မော်တော်ယာဉ်များကို ယခင်အတိုင်း ရာခိုင်နှုန်း ၄၀ ဖြင့်သာ ဆက်လက် ကောက်ခံမည်ဖြစ်သည်။
အကောက်ခွန်နှုန်းများ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ “အကောက်ခွန်နှုန်း တိုးမြှင့်တယ် ဆိုတာက အာဆီယံနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောတော့ရှိတယ်။ နောက်တစ်ခုက တချို့နေရာတွေမှာ တိုင်းပြည်အတွက် အကျိုးနည်းစေမယ့်ဟာတွေ မြှင့်တာကတော့ မှန်တာပေါ့လေ။ အကျိုးများစေမယ့် ဟာကျတော့ လျှော့သင့်တာ လျော့ရမှာပေါ့။ အကောက်ခွန် ဆိုတာက နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ သွင်းကုန်အပေါ်မှာ ကောက်တဲ့အခါမှာ နိုင်ငံရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ပမာဏတို့ ၀ယ်ယူစားသုံးနိုင်မှု ပမာဏတို့ အခြေအနေတို့ကို ကြည့်ပြီးတော့ အပြောင်းအလဲ လုပ်တာကတော့ ထုံးစံပါပဲ” ဟု ဒေါက်တာအောင်ကိုကို (စီးပွားရေးပညာ၊ စီးပွားရေး ပေါ်လစီ) က သုံးသပ်ပြောကြားခဲ့သည်။
အန္တရာယ် စိန်ခေါ်မှုများအကြား အကောင်းဘက် ဦးတည်သည့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှု အရှိန်အား ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန်မှာ ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်သင့်သည့် အစိုးရကဏ္ဍ သုံးစွဲမှုများနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို တည်ငြိမ်သည့် မေခရိုစီးပွားရေး အခြေအနေ၊ အားကောင်းခိုင်မာသော မူဝါဒများဖြင့် အားပေးထောက်ကူရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခ နှုန်းထားများအား သင့်လျော်စွာ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကုမ္ပဏီများ ဥပဒေအား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အခွန်ထမ်းများအတွက် ပြည်သူ့ရေးရာ ၀န်ဆောင်မှုများ တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်းများအတွက် လုံခြုံစိတ်ချရသည့် ၀န်းကျင်ကောင်းတစ်ခု ဖန်တီးပေးခြင်းတို့က အထောက်အကူ ပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရုံး၏ ဦးဆောင် ဘောဂဗေဒ ပညာရှင် ဟန်စ်အာနန်ဘက်ခ်က ပြောကြားသည်။
ထို့ပြင် “ဂယက်ကတော့ အားလုံးခံရတာပေါ့။ စက်ရုံအလုပ်ရုံဆိုတာ ရှုံးတာမြတ်တာ မကြောက်ပါဘူး၊ လုပ်လို့ရအောင်ပဲ လုပ်ချင်ကြတာ။ အလုပ်လုပ်လို့ မရလောက်အောင် ဖြစ်လာရင်တော့ လုပ်ငန်းတွေ ရပ်ကြမယ်၊ နောက်ဆုတ်ကြမယ်၊ လုပ်လို့ရတဲ့ တိုင်းပြည်မှာပဲ သွားလုပ်ကြမှာပေါ့” ဟု စက်မှုဇုန် လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးက ဆိုသည်။
“ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပြောတာကတော့ ဆီဈေးတစ်ခုတည်းပဲ။ အဲဒီနောက်ကွယ်မှာ ပြဿနာပေါင်း မြောက်မြားစွာ ရှိလာနိုင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီလေ။ လခကို ၄၈၀၀ ပေးရပြီ။ မီးကလည်း ဒီရက်ပိုင်းမှာ တောက်လျှောက် ပျက်နေပြီ။ ဒီကြားထဲ လယ်သမားကိစ္စတွေကလည်း တစ်စခန်းထနေပြီ။ အဲဒီတော့ ဌာနဆိုင်ရာတွေကလည်း အရမ်းရစ်နေပြီ။ အရင်လို မြန်ဆန်လွယ်ကူအောင် မဟုတ်တော့ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အခက်အခဲတွေ ဖြစ်လာတဲ့ အခါကျတော့ လူတွေလုပ်ရတာ မပျော်ကြတော့ဘူး။ စိတ်ညစ်ကုန်ကြပြီ။ သူဌေးစိတ်ညစ်ရင် ဘာဖြစ်လဲ စက်ရုံပိတ်လိုက်ကွာဆိုပြီး တစ်ခွန်းတည်းပဲ ပြောလို့ရတယ်။ သူဌေးက ငတ်မသွားဘူး။ မှီခိုနေတဲ့သူတွေ ဒုက္ခရောက်မှတော့ ကျွန်တော် စိုးရိမ်တယ်ဗျာ” ဟု လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
“ဒီအချိန်က ကုစားရင် မီပါသေးတယ်။ လုပ်တဲ့သူတွေကို ဥပဒေနဲ့ အကာအကွယ်ပေးပါ။ ဈေးကွက် စီးပွားရေးအရ Floating ဖြစ်နေတာကို နားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သဘာဝ မကျတဲ့ ဟာမျိုးတွေကို ထိန်းညှိပေးပါ။ ဒါဆိုရင် ရပါပြီ။ နိုင်ငံတော်က ဘာမှ ကုန်ကျစရာ မလိုပါဘူး။ လုပ်တတ်တဲ့သူကိုသာ ခေါင်းဆောင်တင်ပြီး လုပ်ခိုင်းပါ။ အရည်အချင်းရှိတဲ့သူတွေ မြန်မာပြည်မှာ အများကြီးရှိပါတယ်” ဟု လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက ဆိုသည်။
အထက်ပါဈေးနှုန်းများသည် ဈေးကွက်အတွင်းမှ ရရှိသော ဈေးနှုန်းများကို ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပြီး နေရာကိုလိုက်၍ ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်ပါသည်။
Posted in FeaturesTagged ကုန်ဈေးနှုန်း, စီးပွားရေးLeaveaComment on စီးပွားက ကျပ်၊ လုပ်ရကိုင်ရ ခက်၊ ကုန်ဈေးနှုန်းက တက်
နှစ်နှစ်အတွင်း ကုန်သွယ်မှုနှင့် ဆန်တင်ပို့မှု စံချိန်တင်ခဲ့သော်လည်း ပို့ကုန်တင်ပို့ရန်အတွက် အရည်အသွေး၊ အချိန်မီတင်ပို့နိုင်မှု၊ သယ်ယူပို့ဆောင် သိုလှောင်စရိတ်ကြီးမြင့်မှု အားနည်းချက်များရှိဟု သိရ
ရန်ကုန်မြို့ရှိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-ကြည်နိုင်)
အစိုးရသစ် နှစ်နှစ်အတွင်း ကုန်သွယ်မှုပမာဏနှင့် ဆန်တင်ပို့မှု စံချိန်တင်နိုင်ခဲ့သော်လည်း ပို့ကုန်တင်ပို့ရန်အတွက် အရည်အသွေး၊ အချိန်မီ တင်ပို့နိုင်မှု၊ သယ်ယူပို့ဆောင် စရိတ်ကြီးမြင့်မှု အားနည်းချက်များရှိကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်က ပြောကြားသည်။
အစိုးရသစ် နှစ်နှစ်အတွင်း အောင်မြင်မှုများ ရှိသကဲ့သို့ အားနည်းချက်များလည်း ရှိခဲ့ကြောင်း၊ အောင်မြင်မှု အနေဖြင့် ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ စံချိန်တင် တိုးတက်လာခြင်း၊ ဆန်တင်ပို့မှု ယခင်အမြင့်ဆုံး စံချိန်နီးပါး တင်ပို့နိုင်ခြင်းဖြစ်ပြီး ပို့ကုန်တင်ပို့ရန်အတွက် အရည်အသွေး၊ အချိန်မီ တင်ပို့နိုင်မှု၊ သယ်ယူပို့ဆောင် သိုလှောင်စရိတ် ကြီးမြင့်မှု စသည့်အားနည်းချက်များလည်း ရှိကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်က ဆိုသည်။
နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးမူဝါဒ၊ ကုန်သွယ်ရေးကဏ္ဍ၏ လုပ်ငန်းစဉ်များ ချိတ်ဆက်ပြီး လုပ်ငန်းစဉ် ၂၆ ရပ်ကို ကဏ္ဍကြီးခြောက်ရပ် ခွဲခြားပြီး အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
စီးပွားရေးမူဝါဒများနှင့်အညီ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသည့် ကဏ္ဍကြီး ခြောက်ရပ်ဖြစ်သော ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေး၊ ကုန်သွယ်မှုလွယ်ကူရေး၊ ကုန်သွယ်မှု စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေး၊ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ဖြေလျှော့ပေးရေး၊ ကုန်သွယ်မှု ပညာပေးရေးနှင့် စားသုံးသူ အကာအကွယ်ပေးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအား ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များနှင့်အညီ ပိုမိုဆောင်ရွက်ကြရမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန် ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်က ပြောကြားသည်။
အစိုးရသစ် လက်ထက်၌ ချမှတ်ခဲ့သည့် စီးပွားရေးမူဝါဒ ၁၂ ချက်နှင့်အညီ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန အနေဖြင့် ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ရန် မျှော်မှန်းချက် ချမှတ်ဆောင်ရွက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန၏ ကုန်သွယ်ရေး အခြေခံမူများဖြစ်သည့် ကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းများ နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားများ၏ အကျိုးစီးပွားကို ရှေးရှုရေး၊ ကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းများသည် ပြည်သူများအပေါ် ဖိစီးမှု မဖြစ်စေရေး၊ ကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းများကို အမြတ်အစွန်းရရှိမှု အဓိကမထားဘဲ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှု ဦးတည်ချက်များဖြင့် ရှေးရှုဆောင်ရွက်ရေးတို့ကို အခြေခံထား ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရည်ရွယ်ချက်များ အနေဖြင့် ဈေးကွက်စီးပွားရေး စနစ်နှင့်အညီ ကုန်သွယ်ရေး မူဝါဒများကို စနစ်တကျ ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ရေး၊ ပို့ကုန်တိုးချဲ့မြှင့်တင်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး၊ ခေတ်မီသတင်း အချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာ (ICT) အသုံးပြု၍ ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရေး၊ ဒေသတွင်း နိုင်ငံများနှင့်သာမက နိုင်ငံတကာနှင့် ပူးပေါင်း၍ ကုန်သွယ်မှု တိုးချဲ့ရေး၊ ကုန်သွယ်မှု ပတ်ဝန်းကျင် တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေး တို့ကိုလည်း ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်က ပြောကြားခဲ့သည်။
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန၏ မျှော်မှန်းချက်အနေဖြင့် “ကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းများဖြင့် အမျိုးသားစီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ရန်” ချမှတ်ထားပြီး ကုန်သွယ်မှုပမာဏ တိုးတက်ရေး၊ ဈေးကွက်စီးပွားရေး စနစ်နှင့်အညီ ပုဂ္ဂလိက အခန်းကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် အားပေးမြှင့်တင် ဆောင်ရွက်ရေး၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက်တွင် မြန်မာ့ထွက်ကုန်များ ဈေးကွက်ဝေစု ပိုမိုရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရေး၊ ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေ ချောမွေ့စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အတွက် ပံ့ပိုးကူညီရန် စသည့် ရည်မှန်းချက် လေးရပ်တို့ကို ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ၎င်းကဆက်လက် ပြောကြားသည်။
Posted in BusinessTagged စီးပွားရေးLeaveaComment on နှစ်နှစ်အတွင်း ကုန်သွယ်မှုနှင့် ဆန်တင်ပို့မှု စံချိန်တင်ခဲ့သော်လည်း ပို့ကုန်တင်ပို့ရန်အတွက် အရည်အသွေး၊ အချိန်မီတင်ပို့နိုင်မှု၊ သယ်ယူပို့ဆောင် သိုလှောင်စရိတ်ကြီးမြင့်မှု အားနည်းချက်များရှိဟု သိရ
စီးပွားရေးမြို့တော်ဟု သတ်မှတ်ထားသည့် ရန်ကုန်မြို့တစ်နေရာအား တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ- ဆန်းထူးအောင်)
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် မတ်လအထိ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဒေါ်လာ ၃၂၂၁ သန်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကျပ် ၈၅၁ ဘီလျံရှိကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးမြင့်သောင်းက မေ ၈ ရက်တွင် ပြုလုပ်သည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒုတိယအကြိမ် ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၂၅ရက်မြောက်နေ့) တွင် ပြောကြားသည်။
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလှဌေး၏ “ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း စီးပွားရေး ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးနှင့် ကုန်ဈေးနှုန်း ကျဆင်းစေရေးတို့အတွက် တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ဆိုင်သော စီမံချက်၊ စီမံကိန်းများချမှတ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် အစီအစဉ်ရှိ/ မရှိ” မေးခွန်းအား ပြန်လည်ဖြေကြားရာတွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးမြင့်သောင်းက ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ ၂၀၁၇-၂၁၀၈ ဘဏ္ဍာနှစ် မတ်လအထိ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ လုပ်ငန်းအရေအတွက်မှာ ၁၄၃ ခုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏက ဒေါ်လာ ၃၂၂၁ သန်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရ ခွင့်ပြုထားတာတော့ လုပ်ငန်းအရေအတွက်မှာ ၄၅ ခုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ ကျပ်ဘီလျံ ၈၅၁ ရှိပါတယ်။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများကတော့ ၈၀၃၄ ဦးခန့် အလုပ်အကိုင်ရရှိလာမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်” ဟု ၀န်ကြီး ဦးမြင့်သောင်းက ပြောကြားသည်။
ထို့ပြင် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (FDI) အနေဖြင့်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများ တိုးတက်များပြားပြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများလည်း ပိုမိုရရှိလာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စီးပွားရေး ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးနှင့် ကုန်ဈေးနှုန်း ကျဆင်းစေရေးကို အထောက်အကူပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၀န်ကြီးဦးမြင့်သောင်းက ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ပုံမှန်ဈေးနှုန်းအရ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ GDP တိုးတက်မှုနှုန်းများမှာ မူလလျာထားချက်အရ ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီး နှစ်ကုန်ခန့်မှန်းခြေ (ယာယီ) စာရင်းအရ ၈ ဒသမ ၆ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်၍ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက တိုးတက်မှုနှုန်းအများဆုံးဖြစ်သည်ကို တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် မြို့သစ်စီမံကိန်းများ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း အငှားအိမ်ရာ၊ အရောင်းအိမ်ရာများ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးအဆင့်မြှင့်တင်ရန်အတွက် သင်တန်းကျောင်းများ၊ လယ်ယာစီးပွားရေးဝန်ဆောင်မှုစင်တာ စီမံကိန်းများ၊ ငါးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရန် ငါးကန်၊ ပုစွန်ကန် ဖွံ့ဖြိုးရေးကို မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှ ဦးဆောင်၍ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ Vocational Training သင်တန်းကျောင်းများ၊ စက်မှုဇုန်စီမံကိန်းများ၊ ရန်ကုန်အထူးစီးပွားရေးဇုန် (Yangon Special Economic Zone) များကိုလည်း ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၀န်ကြီးမြင့်သောင်းက ပြောကြားသည်။
Posted in NewsTagged စီးပွားရေးLeaveaComment on ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဒေါ်လာ ၃၂၂၁ သန်းနှင့် ပြည်တွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကျပ် ၈၅၁ ဘီလျံရှိကြောင်း စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ပြောကြား